ဟန်းဂုရွာ: November 2011
ကိုရီးယားရောက် တောင်သာမြို့ညီအကိုများ၏ အလှူမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 6:25 PM0comments
မြန်မာတွေ တကယ်ပဲ ညံ့ကြလို့လား
ရေးသားသူ — သွန်းနေစိုး Thorn Nay Soe
သူတို့နဲ့အတူ ပါလာတဲ့ တပ်တွေက ...
They Fought withabravery and obstinancy I never witnessed in any troops. They fought desperately, reserving their fire to the last moment and seldom missing their object. Little is known of the march of Mahabandula's forcesacross the mountains of Arakan to the Irrawaddy;
`မင်းသားသည် ရည်မှန်းချက်ကြီးတစ်ခုကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရန စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာလှသူ ဖြစ်လေသည်။ ထိုရည်မှန်းချက်မှာ ဥရောပမှာ ခေတ်ပညာများ တတ်မြောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံခေတ်မီလာစေရေးပင်တည်း။ .... မိမိတို့ လူမျိုး အဆင့်အတန်းတက်ရန် ပညာလိုသည်ကို သူ ထိုးထွင်း၍ သိလေသည်။ .... သူကဲ့သို့ ယောက်ျားကောင်းသည် ရှာမရှားလောက်ပေသည်´
၁။ [Facebook ကို ဖွဘုတ်လို့ ပြောနေကြသလိုပဲ။ ခုတလော ပုတ်ခတ်တာတွေ တော်တော်တွေ့နေရတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်နိုင်ငံသမိုင်းပါ ပုတ်ခတ်လာတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ရှောင်တခင် ခုခံချေပချက်ဖြစ်တယ်။]
၂။ (တမင် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေက အကိုးအကားထုတ်ရတာဟာ မြန်မာဆရာတွေရေးတဲ့စာအုပ်ဆိုရင် မြန်မာချင်း ပင်းပြောတယ်ထင်မှစိုးလို့ပါ။ ညတွင်းချင်းရှာရတာမို့ စိတ်ရှိသလောက် မပြနိုင်ဘူး။ အရေးထဲ Connection ကကျနေတော့ Internet ပေါ်က လုံးဝ ယူမရခဲ့ဘူး)
ပို့စ်တင်သူ၏ မှတ်ချက် -
- ကြိုက်လို့ ဟန်းဂုရွာမှာ ရှယ်လိုက်တာပါ ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 8:14 AM2comments
Labels: ဘယ်သူဘာပြောလဲ, မျှဝေခြင်း, အက်ဆေး, အယူအဆ, ဆောင်းပါး
အီးပီအသစ် အီးပီအဟောင်းနှင့် ဗီဇာသက်တမ်းပြဿနာများကို တူးဖော်ကြည့်ခြင်း
ခုတလော တိုင်ပတ်ခဲ့သူတွေ နောက်ထပ် ၂ နှစ်ရမလား ။ ၃ နှစ်ထပ်ရမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထပ်နေသဗျ ။ အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် တိုင်ပတ်ရရင် ၃ နှစ် ထပ်ရမယ် ။ တိုင်မပတ်ရရင်တော့ ၅ နှစ်ဆက်တိုက်ရမယ်လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ် ။
တိုင်ပတ် ၊ ၃လနေ ပြီး ပြန်လာတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦးကို သူဌေးက “မင်း ဗီဇာ နောက်ထပ် ၁နှစ်နှင့် ၉လ ပဲ ရမယ်” လို့ ပြောသတဲ့ ၊ “ရုံးကစာဝင်လာလို့တဲ့” (ဘယ်ရုံးလဲတော့ မသိပါ ။)
သူ့ရဲ့ မူလ ပြည်ဝင်ရက် ၊ ဗီဇာကုန်ရက်တို့ကို ကျနော် မမေးမိခဲ့ပါ ။
တစ်ခုခုမှားနေတာတော့ သေခြာနေပြီ ။
တိုင်ပတ်ဖို့မလိုတဲ့ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အသစ်ကို မှားနိုင်တာ ၁ ခုက ၊ သူဌေးက မလိုအပ်ဘဲ တိုင်ပတ်ခိုင်းခဲ့လေသလား ။
နောက်မှားနိုင်တာ ၁ ခုက ၊ သူဌေးက ဥပဒေပြဋ္ဌားန်းချက်ကို အယူအဆမှား ၊ အတွက်မှားပြီး ပြောလေသလား ။
အခု ပြဿနာကအထူးအဆန်း ဖြစ်နေလို့ အီးပီအသစ်နှင့် အီးပီအဟောင်း ဗီဇာသက်တမ်း ပြဿနာကို ပြန်ပြီး စီစစ်ကြည့်မိပါတယ် ။
နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ငှားရမ်းခွင့် စသည်များဆိုင်ရာဥပဒေ (외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 ) ပြင်ဆင်ချက်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ဥပဒေအမှတ် ၉၇၉၈ (법률 제9798호) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အသက်ဝင်တဲ့အပိုင်းနှင့် ၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ၁၀ ရက်နေ့မှာ အသက်ဝင်တဲ့အပိုင်းဆိုပြီး ၂ပိုင်းကွဲနေပါတယ် ။
တိုင်ပတ်ဖို့ လိုမလို ကိစ္စကတော့ ပထမပိုင်းမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ။
/2009. 12.10일 이후’ ‘사용자의 재고용 허가 요청이 있는 경우’부터 적용함 (개정 법률 부칙 제3조)/
“ ၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၀ ရက်နောက်ပိုင်း ၊ အလုပ်ရှင်က ပြန်လည်ငှားရမ်းလိုကြောင်း လျှောက်ထားသည့်အချိန်မှ အစပြု၍ အကျုံးဝင်သည်” လို့ ဆိုထားပါတယ် ။
/외국인고용법 시행규칙상 ‘재고용 신청’은 ‘취업기간 만료 90일전부터 30일전까지 신청‘ 하여야 함/
“ ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့်လျှောက်လွှာကို ၊ မူလအလုပ်စာချုပ်သက်တမ်း မကုန်မှီ ရက်ပေါင်း ၉၀မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ မတိုင်မှီကြား (ရက်ပေါင်း ၆၀ကာလတာ) အတွင်း လျှောက်ထားရမည် ”ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ ။
ဒီမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်က ၊ အလုပ်သမားရဲ့ ဗီဇာကုန်တဲ့ရက်က အဓိကမကျဘဲ ၊ အလုပ်ရှင်က ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားတဲ့ ရက်က အဓိကကျနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
အလုပ်ရှင်က ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့်ရတဲ့နေ့ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၀ရက် နောက်ပိုင်း ဖြစ်တယ်ဆိုလျင် ၊ အလုပ်သမားဟာ တိုင်ပတ်စရာမလိုဘဲ နောက်ထပ် ၂ နှစ် (မူလ ၃နှစ်နှင့် ပေါင်းလျင် စုစုပေါင်း ၅ နှစ်) ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိမှာပါ ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၀ ရက်မတိုင်မှီ ထပ်မံငှားရမ်းခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေကတော့ တိုင်ပတ်ဖို့လိုပြီး ၊ နောက်ထပ် ၃ နှစ် ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိကြမှာပါ ။
ဒီတော့ - အလုပ်သမားဗီဇာကုန်ရက်နှင့်တွက်ပြီး ပြောကြကြေးဆိုလျင် -
/현재 외국인고용법 시행규칙상 ‘재고용 신청’은 ‘취업기간 만료 30일전까지 신청‘ 하여야 하므로 2009.12.10 이후 재고용 신청부터 개정법을 적용할 경우 결과적으로 ‘재고용시 출국 없이 계속 근무’하도록 하는 개정 법률은 2010.1.9 체류기간 만료자부터 적용됩니다./
ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့်လျှောက်ထားခွင့်သည် ဗီဇာမကုန်မှီ ရက် ၃၀ အတွင်း လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၀ ရက်မှ နောက် ၂၉ ရက်တာ (၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ဇန္နဝါရီ ၉) ကာလအတွင်း ဗီဇာကုန်မည့်သူများက တိုင်ပတ်ရမည့်သူများစာရင်းဝင်ဖြစ်သွားပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဗီဇာကုန်ရက်မတိုင်မှီ ရက်ပေါင်း ၉၀အလိုမှ အစပြုပြီး ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့် စတင် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်လည်း ရှိနေပြန်တဲ့အတွက် ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့်ကို စောစောစီးစီး လျှောက်ထားခဲ့မည်ဆိုလျင်၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန္နဝါရီ ၉ ရက် နောက်ပိုင်း ရက်ပေါင်း ၆၀ ကာလ (မတ်လ ၁၁ ရက်) အတွင်း ဗီဇာကုန်ရက်ဖြစ်သော်လည်း ၊ တနည်းအားဖြင့် အလုပ်ရှင်က ၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၁၀ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ကတည်းက ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုလျင် အဲဒီအလုပ်သမားဟာ တိုင်ပတ်ဖို့လိုပြီး ၊ ပြန်လာလျင် နောက်ထပ် ၃ နှစ်ထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာအားဖြင့် ၊ ယုတ္တိရှိရှိ (Logically) စဉ်းစားကြမယ်ဆိုပါစို့ ။
ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ဗီဇာကုန်မယ့် အလုပ်သမားတစ်ဦးအတွက် ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့်ကို သူ့ သူဌေးက ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာမှ လျှောက်ထားမိလိုက်လို့ တိုင်ပတ်ဖို့မလို (မလို) တဲ့သူ အီးပီအသစ် အကျုံးဝင်သူ ဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် ၊ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာမှ ဗီဇာကုန်မယ့် အခြား အလုပ်သမားတစ်ဦး ကတော့ သူ့အလုပ်ရှင်က ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့်လျှောက်လွှာကို ရက်၉၀ ကြိုပြီး စောစောစီးစီး (၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၀ ရက်မတိုင်မှီ) လျှောက်ထားခဲ့မယ် ဆိုလျင် ၊ အဲသည် နောက်မှ ဗီဇာကုန်မယ့် အလုပ်သမားဟာ တိုင်ပတ်ဖို့လိုတဲ့သူ အီးပီအဟောင်းနှင့် ဆိုင်တဲ့သူ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။
ဒီတော့ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ဇန္နဝါရီ ၉ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၁ ရက် (ရက်ပေါင်း၆၀ကာလ) အတွင်း ဗီဇာကုန်မည့်သူများဟာ အလုပ်ရှင်ရဲ့ ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့် လျှောက်ထားရက်အပေါ်မူတည်ပြီး တိုင်ပတ်ရန်လိုမလို ၊ နောက်ထပ် ဗီဇာ ၂ နှစ်ထပ်ရမလား ၃နှစ် ထပ်ရမလားဆိုတဲ့ အရှုပ်ထုပ် စာရင်းဝင်သူများ ဖြစ်လာပါတယ် ။
ဒီတော့ တိုင်ပတ်ဖို့လိုမလို ၊ နောက်ထပ် ၃ နှစ်ရမရ ၊ အီးပီအသစ်နှင့် အကြုံးဝင်သလား အီးပီအဟောင်းပဲလားဆိုတဲ့ ပြဿနာဟာ ၊ ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၀ မတ်လ ၁၁ ရက်အကြားဗီဇာ ကုန်မယ့် အလုပ်သမားများအဖို့ ၊ မိမိတို့ဗီဇာကုန်ရက်က အဓိကမကျဘဲ ၊ မိမိအား ငှားရမ်းမည့် အလုပ်ရှင်က ပြန်လည်ငှားရမ်းခွင့် (Re-employment Permit) ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့မတိုင်မှီ လျှောက်ထားရဲ့လား ဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မူတည်နေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
၂၀၁၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နောက်ပိုင်း ဗီဇာကုန်မည့်သူများကတော့ ၊ တိုင်ပတ်ဖို့မလိုတာ ရှင်းနေတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ က အီးပီအသစ်နှင့် လုံးဝအကျုံးဝင်တယ် ။ အသစ်စက်စက်တွေပေါ့ဗျာ ။
ကိုယ်ဟာ တိုင်ပတ်ခဲ့ရပေမယ့် ဗီဇာ ၁နှစ်နှင့် ၉လပဲ ထပ်ရမယ်လို့ သူဌေးက အခိုင်အမာ ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ ၊ တိုင်ပတ်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်စစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ် ။ တိုင်ပတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မှားခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။
တိုင်ပတ်မှားခြင်း ပြဿနာလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ ။
စက်ရုံမှာ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေ အများကြီးပဲ။ ဗီဇာက တစ်ပြိုင်တည်းကုန်ကြမှာ ။ စက်ရုံမှာ အလုပ်ကရှုပ်နေတယ် ။ အနည်းဆုံး တစ်လ နေကြပြီးမှ ပြန်လာကြရမှာဆိုတော့ အလုပ်သမားအားလုံး အတူတူခွင့်ပေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး ။ ဒီတော့ သူဌေးက အလှည့်ကျပြန်လွတ်မယ်ပေါ့ ။ တစ်ချို့စောစောပြန်ကြ ။ တစ်ချို့ကတော့ နောက်ကျမှ ဗီဇာကုန်ရက်ကပ်ပြီးပြန်ကြပေါ့ ။ စောစောပြန်ကြရတဲ့သူတွေက ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ မူလဗီဇာကြီးကုန်တဲ့ရက် နှင့် ကပ်ပြီး ပြန်ရောက်လာကြတယ် ။ ဗီဇာသက်တမ်းအသစ်တိုးဖို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရောက်တော့ ပြဿနာတက်ရော့ ။ ဥပဒေအရ ဗီဇာအသစ်ဟာ မူလဗီဇာကုန်ရက်နှင့်အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၃၀ ကွာနေရမှာ ။ အခု ရက်၃၀ မခြားဘဲဖြစ်နေလို့ တိုင်၂ခါ ပြန်ပတ်လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးလည်း ရှိခဲ့ပါတယ် ။ မြောက်ဥက္ကလာပသား ကိုအောင်မျိုးဝင်း တိုင် ၂ခါ ပတ်လိုက်ရသတဲ့ဗျ ။
/တိုင်ပတ်ရခြင်းရဲ့ မူလဘူတ ရည်ရွယ်ချက်က နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးကို ကိုရီးယားမှာ ၅ နှစ်ထက်ကျော်ပြီး ၊ တရားဝင်မနေစေလိုတဲ့ သဘောပါ ။ တရားဝင် ၅ နှစ် ဆက်တိုက်နေပြီးလျင် ၊ အခြေခံဥပဒေအရရော ၊ နိုင်ငံသားပြုမှုဥပဒေအရပါ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ် (နိုင်ငံသားပြုခွင့်) လျှောက်ထားခွင့်ရှိနေလို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့သဘောပါ ။ /
တိုင်ပတ်တာကြာနေလို့ အလုပ်ရှင်က အလုပ်ရုံပိတ်ရတော့မလိုဖြစ်ပြီး မစောင့်နိုင်လို့ ၊ တိုင်ပတ်နေတဲ့ အလုပ်သမားဗီဇာကို ရုပ်သိမ်း ၊ အခြားအလုပ်သမားအသစ် ထပ်ငှားလိုက်လိုက်လို့ ၊ ကိုပီတာလို တိုင်ပတ်ရင်း ကိုရီးယားကို ပြန်မလာရတော့တဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။
မျက်စိမှိတ်မယုံဘဲ ၊ အတည်ပြုချက်ယူထား
ဒီတော့ ကိုရီးယားသူဌေးက ပြောတယ်ဆိုတိုင်း မျက်စီမှိတ်ပြီး အမှန်လို့ ယူဆလို့မဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုပါတယ် ။ ဟိုးအရင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ကိုရီးယားသူဌေးပြောတာယုံမိလို့ နစ်နာသွားခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေလည်း အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးတယ် ။ ကြုံရင် ပြောပြဦးမယ် ။
ကိုယ့်ဗီဇာ ၂ နှစ် ရမလား ၃ နှစ်ရမလား ၊ မရှင်းမရှင်း ဖြစ်နေရင် သက်ဆိုင်ရာကို မေးမြန်း အတည်ပြုချက်ယူထားရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 12:07 AM 1 comments
Labels: အယူအဆ, အလုပ်ခွင်ရေးရာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ဆောင်းပါး, မောင်းသတင်း
ဓမ္မဒူတ မြေအလှူတော်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ (၁)
ကိုရီးယားမြေမှာ ကိုရီးယားတွေနှင့် ရေစက်ဆုံချင်လို့ ၊ ကိုရီးယားမြေမှာ ဒါနမျိုးစေ့ချချင်လို့ ၊ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒနှင့် ဒါနအတူပြုချင်လို့ ၊ ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) မြေအလှူတော်မှာ အလှူတော်ငွေ ထည့်ပါရစေ ၊ ဘယ်လိုလှူရမလဲ ဆိုပြီး (မြန်မာ) ပြည်တွင်း ကနေပြီး ဆက်သွယ်လာတဲ့ ပါရမီရှင်တွေ ရှိပါတယ် ။
သက်ဆိုင်သူများထံသို့ ပြန်စာများ အသီးသီး အသကအသက ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း မသိသေးသူများလည်း သိရှိကြပြီး ဒါနပါရမီမျိုးစေ့ အတူတူ ကြဲချ စိုက်ပျိုးနိုင်ကြစေရန်အလို့ငှာ ဟန်းဂုရွာကနေပြီး မောင်းထုလိုက်ရပါတယ် ။
မြန်မာ ပြည်တွင်းက အလှူတော် ပါဝင်လိုသူများ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒထံ တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားပြီး ၊ ဆရာတော် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လှူနိုင်ကြသလို ၊ ဆရာတော်ကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အခက်အခဲရှိသူများ ၊ ဆရာတော်ကြီး ၏ အပါးတော်မြဲ ဒကာတော် ဦးကြည်စိုး (ဖုန်း ၆၆၇-၂၀၉) ထံ ဆက်သွယ်ပြီးလည်း လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်မှ ကိုရီးယားသို့ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းလိုပါက ၊ အောက်ဖော်ပြပါ ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းလည်း ကြေညာမောင်းခတ်လိုက်ပါတယ် -
ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)၏ နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်း
- ဘဏ်အမည် KOREA EXCHANGE BANK
- ဘဏ်ခွဲအမည် BUPYEONG STATION BRANCH
- ဘဏ်စာရင်းအမှတ် 650-008152-378
- စာရင်းအညွှန်း(swift code): KOEXKRSE
- ဘဏ်လိပ်စာ 738-21 BUPYEONG-DONG BUPYEONG-GU INCHEON-CITY
- ဘဏ်စာရင်းပေါက်အမည် DHAMMADUTA CULTURE ASSOCIATION
- ဘဏ်ဖုန်း T: (082) 032-503-1802,
အထက်ပါ ဘဏ်စာရင်းဟာ ကိုရီးယားဝမ်ငွေ (KRW) မှ အပဖြစ်သော ဒေါ်လာ ၊ ယူရို ၊ တရုတ်ယွမ် ၊ ဂျပန်ယန်း ၊ ဗြိတိန် ပေါင် စသည့် နိုင်ငံခြားငွေ ၁၀ မျိုးကို လက်ခံနိုင်သော နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်း ဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်း ၊ လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါတယ် ။
ထို့အပြင် ဓမ္မဒူတမြေအလှူတော်အတွက် ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့ ၊ နယူးစတား ရတနာဆိုင် မှ ဦးရန်အောင် ဒေါ်ရင်ရွှင် (မိုးညှင်း) မိသားစုက ပေးပို့လှူဒါန်းလာသည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ (ငါးရာ) ကိုလည်း ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံရရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းများသို့ ပေးသွင်း စာရင်းတင်ထားပြီုးဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် ဓမ္မဒူတ မြေအလှူတော်အတွက် ယနေ့ (၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ ၂၆) အထိ လက်ခံရရှိပြီး အလှူငွေစုစုပေါင်းမှာ ဝမ် ရှစ်ရာရှစ်ဆယ့်ကိုးသိန်း တစ်သောင်းငါးထောင် (88,915,000 Won) ( အလှူရှင်များစာရင်း /ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ/) နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ ပါရမီရှင်အပေါင်း ထပ်ဆင့် ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြစေရန် ဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးအပ်ပါတယ် ။
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု ။
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ ၂၆ ရက် ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 3:07 PM0comments
Labels: ဓမ္မဒူတအလှူ, ဘာသာရေး, သာဓုအနုမောဒနာ, အလှူ, မောင်းသတင်း
ကိုရက်(ပ်)စ် နည်းဥပဒေ ပြင်ဆင်
ဇူလိုင်၁၃ ၊ ဆောအူးလ် ။
ကိုရက်(ပ)စ် (Korean Employment Permit System:Koreps) ထပ်မံငှားရမ်းခြင်းအစီအစဉ်(Re-employment Program)ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(Rule)ကို ပြင်ဆင်လိုက်ကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည့် လက်ကမ်းစာစောင်အရသိရသည် ။
ယခင်က ၊ ကိုရီးယာလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မူလစာချုပ် ၃ နှစ်ြ ပည့်ပြီးသည့် လုပ်သားများကို ၊ ထပ်မံ(ဆက်လက်) ငှားရမ်းလိုပါက မူလစာချုပ်သက်တမ်းမကုန်မှီ အများဆုံးရက်(၉၀) မှ အနည်းဆုံး(၁)ရက် (စာချုပ်မကုန်ဆုံးမှီ တစ်ရက်အလို) အတွင်း ၊ စာချုပ်အသစ်ချုပ်ဆိုရန် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားရှိသည် ။
သို့ရာတွင် ၊ ယခုအခါ မူလခွင့်ပြုကာလမကုန်ဆုံးမှီ အများဆုံးရက်(၉၀)မှ အနည်းဆုံးရက်(၃၀)အတွင်း (စာချုပ်မကုန်ဆုံးမှီ ရက်၃၀မတိုင်မှီ) ၊ ထပ်မံငှားရမ်းသည့် စာချုပ်အသစ်ကိုချုပ်ဆိုပြီး ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း၊ လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဋ္ဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဋ္ဌာနတွင် ဗီဇာထုတ်ပေးရန်သက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်းစသည့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၊ ဤ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း ၂၀၀၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ အတည်ပြု ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 4:36 AM2comments
Labels: ကိုရီးယားသတင်း, အလုပ်ခွင်ရေးရာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, မောင်းသတင်း
ရေးသားသူ — အင်ကြင်း
ဆောင်းဝင်လာခဲ့ပြီပဲ.. အပြင်မှာ အုံ့မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ အေးစက်နေသည်။ လေတိုက်လိုက်တိုင်း အေးစိမ့်နေသည်။ ရာသီဥတုကြီးက အေးစက်စက်နဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပါ။ ဒီနိုင်ငံက ဆောင်းတွင်းကြီးကို ကျမမုန်းသည်။ အပြင်ထွက်လျှင် အနွေးထည်တွေအထပ်ထပ်ဝတ်ရတာ စိတ်ညစ်မိသည် ။ ဆောင်းဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ သိမ်းထားတဲ့ အနွေးထည်တွေကို ပြင်ရထုတ်ရနဲ့ အလုပ်ရှုပ်လှသည်။ အေးစိမ့်နေတဲ့ ဆောင်းတွင်းမှာ ကျောင်းလည်းမသွားချင်ပါ။ မနက်စောစော အလုပ်သွားရတာလည်း မုန်းသည်။ စာလည်းမရေးချင်ပါ။ အိပ်ယာထဲမှာသွားကွေးနေချင်သည် ။ အေးလွန်းတော့ မလှုပ်မယှက်နေရင်လည်း ကိုယ်တွေလက်တွေ နာချင်သလိုလို ဖြစ်လာသည်။ ပိုဆိုးသည်က ဆောင်းရောက်လျှင် လည်ထောင်အနွေးထည်တွေကို ကျမက မ၀တ်ချင်မ၀တ်တတ်ပါ။ နောက်ပြီး လည်ပင်းအေးတာနဲ့ ကျမ အအေးမိတတ်သည်။ အေးတိုင်းချောင်းဆိုးပြီး ချောင်းဆိုးလျှင် တော်တော်နဲ့မပျောက်တတ်ပါ။ လူကြားထဲမှာ ချောင်းဆိုးတာကို အောင့်ထားရတာ ယားကျိကျိနဲ့ တော်တော်အနေရခက်ပြီး စိတ်ညစ်ရသည်။ သည်နေ့ ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးနေတာနဲ့ ဘယ်မှမထွက်ပဲ အိမ်ထဲမှာ နေရင်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ တစ်ခုခုကို သတိရသလိုလို။ ပျင်းတာနဲ့ အင်တာနက်လေး ကြည့်လိုက် စာဖတ်လိုက်လုပ်နေမိသည်။အခန်းထဲမှာ နေရင်း ပျင်းတော့ တခုခုကိုသတိရမိသလိုလို…
ကိုယ့်ဖာသာ အထီးကျန်သလိုလိုခံစားမိသည်။ ဆောင်းဝင်လာတော့ ညနေစောစောဆို အုံ့မှိုင်းပြီး မှောင်နေသည်။ ၆နာရီလောက်ဆို မှောင်ပြီလေ။ ဒီအချိန်လောက်ရောက်တော့ ထမင်းဟင်းချက်ဖို့ပြင်ရသည်။ ဟင်းချက်ရန်ပြင်ဆင်ပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးကို သွားဖွင့်ထားလိုက်သည် ။ ကျမနေတဲ့ အခန်းက ဟင်းချက်သည့်နေရာ မီးဖိုကနေ အတွင်းကို ၀င်သည့်တံခါးမနဲ့ တစ်ဆက်ထဲရှိနေသည်။ မီးဖိုရှေ့မှာ ပြူတင်းပေါက်ရှိနေပေမယ့် အနံ့နံမှာစိုးလို့ ကျမက ဆောင်းတွင်းဘယ်လောက်ပင်အေးအေး တံခါးမကြီးကို အမြဲ သွားဖွင့်ထားတတ်သည်။
ဟင်းချက်နေတုန်း စိတ်ထဲက တစ်ခုခုကို ခံစားမိပြီး နောက်ကို လှည့်ကြည့်မိသည်။ ကျမကို တစုံတယောက်က လှမ်းကြည့်နေသလိုခံစားရသည် ။ အဲဒီခံစာချက်က ခုမှမဟုတ် အမြဲလိုလို တစ်ယောက်ယောက်က ကျမ တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်နေပြီဆိုလျှင် တစ်နေနေရာရာက ရပ်ကြည့်နေသလိုမျိုးခံစားရသည်။ တကယ်ပဲ မမြင်ရသည့်အရာ (တစ်ယောက်ယောက်ပေါ့) ကြည့်နေသလိုပါ။ ကျမကြောက်ရမည့်အစား သူ့ကို နားလည်သနားသလိုစိတ်ဖြစ်မိစမြဲပါ။ ညနေ ၇ နာရီလောက် ကျမ ဟင်းချက်နေရင် တစ်စုံတစ်ယောက်က ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကြည့်နေတာကို သိနေသလိုလို၊ သူ့(ထိုတစ်စုံတစ်ခုသောအရာ)ကို ဘာလို့မှန်းမသိ တစ်ခုခုပြောလိုက်ချင်မိသလို သနားသလိုလိုခံစားမိသည်။
တကယ်တော့ ဘာလုပ်နေနေ လွတ်လပ်သည်။ အခန်းထဲတွင် ကျမတစ်ယောက်ထဲသာ အမြဲရှိနေသည်။
ကျမနေသည့် အခန်းက ဘေးကအခန်းလွတ်တွေရှိနေပေမယ့် ဘယ်သူမှရှိမနေပါ။
ယခင်က ကျမတစ်ယောက်ထဲမို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ခေါ်လာပြတော့ သူက အခန်းက ကောင်းပေမယ့် (စိတ်)မသန့်ဘူးလို့ပြောပြီးမနေပါ။ တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေလာတော့လည်း မကြောက်ဘူးလား တစ်ယောက်ထဲနေတာလို့ မေးပါတယ်။ တခါတလေတော့ ခွက်ကနဲ တစ်ခုခုလွှတ်ချလိုက်တဲ့ အသံမျိုးကြားပေမယ့် ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ် အေးအေးသာနေလို့ ကြားလည်းထွက်ကြည့်မနေမိပါ။ ကျမက မိုးလင်းတော့ ရုံးခန်းသွား ညနေထမင်းပြန်စား တစ်ခါတလေ ညမှဟင်းချက် တီဗွီကြည့်ပြီး ကျောင်းမှာ စာတမ်းသွားရေး၊ စာဖတ်လုပ်နေတာ ည ၁၂နာရီကျော်မှ ပြန်လာတတ်တာမို့ ပြန်လာတော့ အိပ်ချင်နေပြီ ဘာမှမစဉ်းစားမိပါ။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ အခန်းမှာ နေပြီးစာရေး စာဖတ်လုပ်နေတာများသည်။ ညနေလောက်ဆို ဟင်းချက်ရေချိုးပြီး ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ ထိုင်ကြည့်နေတတ်တော့သည်။ ညဆို ကျမနေသည့် အခန်းပတ်လည်က တိတ်ဆိတ်နေတတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း တိတ်နေသည်။ အရင်အဆောင်တွေလို မဟုတ်ပါ။
ခုရက်ပိုင်း ရာသီဥတုပြောင်းလာပြီး အေးလို့လားမသိ မကြာခဏ နေမကောင်းသလိုဖြစ်သည်။ ညညဆိုလျှင် သူရဲလိုလို ဘာလိုလိုမျိုး အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်တတ်သည်။ ဘုရားကန်တော့ အိပ်ပေမယ့် အိပ်မက်မက်ပြီး မနက်နိုးလာလျှင် မမြင်ရသည့် တစ်ယောက်ယောက်က ရှိနေသေး သလိုလို ခံစားမိသည်။
"ဟေး ကျောင်းသူ ကျောင်းသူ"
တံခါးခေါက်သံကြားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ရှင်အဖိုးကြီး ပြုံးရင်း ဘာလုပ်နေတာလဲဟုမေးသည်။
"ထမင်းစားမလို့လေ ၊ အဖိုးကလည်း သောက်လာပြန်ပြီလား"
"အေး.. သောက်လာတာ ဒါမှ မြန်မြန်သေမှာလေ ငါတစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်တယ်ဟယ်"
"ဟာ အဖိုးကလဲလေ မသေဘဲနဲ့ နေထိုင်မကောင်းတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ"
အဖိုးကြီး နှုတ်ဆက်ရင်း ထွက်သွားတော့ ငေးကြည့်မိသည်။
အဖိုးက အသက် ၈၀ရှိပြီ လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်က သူ့မိန်းမအဖွားကြီးဆုံးသွားတော့ တစ်ယောက်ထဲနေသည်။ သားသမီးတွေက အဝေးမှာ… အထီးကျန်ကြောင်း မကြာခဏ ကျမကိုပြောပြတတ်သည်။ အရက်ကလည်း သောက်တတ်စမြဲ… အရက်သောက်တာ အထီးကျန်လို့ဟုပြောသည်။ ကျမလည်း တယောက်ထဲနေတော့ အခန်းကို အပြင်က အလုပ်က ပြန်လာလျှင် တစ်ယောက်ယောက် ရှိမနေလျှင် အထီးကျန်သလိုခံစားရစမြဲပါ ။
ကျမက အနားမှာ ရှိသည့် ဘုရားကျောင်းကို မသွားဘူးလားဟု မေးတော့ ဘုရားသခင်ကို မယုံဘူးတဲ့။ သူကပြောသည် ဘုရားကို ယုံလည်းသေရမှာပဲ မယုံလည်း သေရမှာပဲတဲ့… သူက သေရမှာကြောက်သည်။ ကျမက ပြောပြသည် အဖိုး ဘာသာတစ်ခုခုကို ယုံမှ ကိုယ့်ကို စောင့်ရှောက်တဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ရှိနေတော့ စိတ်ညစ် အထီးကျန်တဲ့အခါ ဆုတောင်း တိုင်တည်တော့ စိတ်နွေးထွေးတာပေါ့လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က စောင့်ရှောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်မှာ နွေးထွေးမူရှိသလို… တစ်ယောက်ထဲ နေသည့်အခါမှာလည်း ကိုယ်ယုံကြည်ရာ အစောင့်အရှောက် မမြင်နိုင်သည့်အရာကပဲဖြစ်စေ ဘာသာတရားက စောင့်ရှောက်သည်လို့ ယုံလျှင် စိတ်နွေးထွေးစေသည်လို့ ကျမထင်သည်။ ဒါ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လေကဲ့သို့ မမြင်ရသည့်အရာတွေလည်း ရှိနေတတ်သည်ကို မယုံပေမယ့် ရှိတယ်လို့တော့ ခံစားရတတ်သည်။
ခုလည်း ကျမ ညနေမှောင်ရီဖြိုးဖျတွင် ဟင်းချက်တိုင်း တစ်စုံတစ်ယောက်က စောင့်ကြည့်နေသလိုလို...
တစ်ရက်က ကျမနဲ့ သူ(မောင်) ညဘက် အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ရင်း မနက်အတွက် ဈေးဝယ်ရအောင်ဆို ဆူပါမားကက် အသေးလေးသွားပြီး အပြန်မှာ ၊ ကျမက အသားတွေဝယ်လာသည်။ အမှန်က ည ၁၂နာရီလောက်ရှိနေပြီ။ ကြက်သားဘူး တစ်ဘူးထဲဆိုတော့ အိတ်မယူပဲ ၊ အသားစိမ်းဘူးကို ဒီအတိုင်း ကိုင်ပြီး ယူလာမိသည် ။ ကျမတို့နားမှာ ကျောင်းဝန်းကျင်ဆိုတော့ တစ်ညလုံးဖွင့်သည့် စတိုးဆိုင်လေးတွေပေါသည်။ ကျောင်းသားတွေကလည်း တစ်ညလုံးနီးပါးရှိနေတတ်တော့ ကင်ပတ် ထမင်းလိပ်ဆိုင်လေးတွေလည်း လာရောင်းတတ်သည်။ ဒါကြောင့် ညဘက် တစ်ယောက်ထဲ အပြင်ထွက်လည်း ကျမက မကြောက်ပါ။ ကျမ အိမ်နားကတော့တိတ်ဆိတ်ပြီး မှောင်နေပါသည်။
အိမ်ပေါ်တက်ပြီးကျမ သော့ဖွင့်မလို့အလုပ်မှာ မောင်က တစ်ယောက်ယောက်လိုက်လာတဲ့ ခြေသံကြားတယ် အရင်ဝင်နှင့် သွားကြည့်လိုက်မယ်လို့ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်း ပြောသည်။ ကျမကတော့ မကြားပါ။ ကျမက ဘယ်တော့မှ ဘာကိုမှသိပ်သတိမထားတတ်သူပါ။ အထဲရောက်မှ စိတ်ထဲမလုံမလဲခံစားရသည် ။
တစ်ယောက်ယောက် အပြင်မှာ ရှိနေသလိုလို။ ကျမနောက်တော့ သတိထားမိသည်… တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်ခုခု တောင်းစားချင်လို့ဟု ထင်မိရင်း စားစရာဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုသွားချထားရမလားလို့ မောင့်ကို မေးလိုက်သည် ။ သူကမလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲပြောသည်။ ကျမကြောက်မှာစိုးလို့ထင်သည်။ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ ထပ်ပြောသည်။
နောက်ညတွေကျ ကျမတစ်ယောက်ထဲ အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်မိသည်။
မနက်မိုးလင်းတော့ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ စိတ်က ဖျောက်ရင်းမေ့သွားသည်။
သို့သော် မမြင်ရသည့် တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်ခါတလေ ကျမထံလာသလိုလို ခံစားရသည်။
ညနေစောင်းဆို ကျမတစ်ယောက်ထဲရှိနေတုန်း သူလာတတ်သလိုလို…
ကျမကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ရပ်ကြည့်နေပါသည်။ သူ့ကို စကားပြောလို့လည်းမရပါ။ ကြည့်နေတာတော့ သိသလိုလို… သူက အထီးကျန်နေသလိုလို သနားစရာကောင်းသလိုလို ကျမစိတ်ထဲမှာ ခံစားရသည်။ အဖော်လည်း မဟုတ်သော သူ့ကို ကျမဘယ်လို လုပ်ပေးရပါ့မလဲ...
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 9:38 PM0comments
အီးပီလုပ်သားများကို လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် (သက်သေခံ) လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်
외국인근로자 경력증명서 발급
အီးပီလုပ်သားများအနေဖြင့် မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်အခါ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်းစသည့်ကိစ္စများတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အလို့ငှာ ၊ ကိုရီးယား အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် (သက်သေခံ) လက်မှတ် များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စ၍ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများသို့ ထုတ်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားပါသည် ။
ထုတ်ယူရမည့်နည်းလမ်းမှာ ၊ (http://www.eps.go.kr/) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) သို့ဝင်ရောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် မိမိတို့၏ နိုင်ငံကူးလက်ှတ်အမှတ် ၊ ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခဲ့သည့် ခုံအမှတ် ၊ စသည်တို့ကို ဖြည့်စွက်၍ အဖွဲ့ဝင် (회원가입) အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရပါမည် ။ ၄င်းနောက် လော့အင် (로그인) ပြုလုပ်ပြီး ၊ မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ (e-certificate) အီး-လက်မှတ်များကို ဆွဲချယူပြီး ၊ ပုံနှိပ်ရယူနိုင်မည်ဟုဆိုပါသည် ။ ထို့ပြင် စာမေးပွဲ အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ချက် ၊ အလုပ်စာချုပ် အခြေအနေ (ဘယ်နှနှစ် ကျန် ၊ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လိုချုပ်ခဲ့ စသည် ) စသည်တို့ကိုလည်း ကြည့်ရှု နိုင်သည်ဟုဆို ပါသည် ။
အလုပ်စာချုပ်ချုပ် အခြေအနေ စုံစမ်းရာတွင် လည်းကောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ယူရာတွင် လည်းကောင်း လိပ်စာစသည်တို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ (반드시 영문으로) ရေးသွင်းကြရမည်ဟု ညွှန်ကြားထားပါသည် ။
လျှောက်ထားအပ်ပါသည် ဟူသော (신청버튼) အကွက်ကို ၁ ကြိမ်သာ နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ပုံနှိပ်ရာတွင် ၅ ကြိမ်အထိသာ ခွင့်ပြုမည်ဟုဆိုပါသည် ။ ၅ ကြိမ်အထက် အလိုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် သက်ဆိုင်ရာ ရုံးသို့ သွားရောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြကာ လျှောက်ထားရယူနိုင်မည်ဟုဆိုပါသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 8:34 AM0comments
Labels: အလုပ်ခွင်ရေးရာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ကြေညာချက်, မောင်းသတင်း
(ရွေးခြယ်ပြိုင်ပွဲ) နိုင်ငံပေါင်းစုံ ဂီတအနုပညာအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်သစ်များကို ကြိုဆိုနေပါတယ်
နိုင်ငံပေါင်းစုံ ဂီတအနုပညာအဖွဲ့ MONTAN မှ အဖွဲ့ဝင်သစ်များကို ကြိုဆိုနေပါတယ်
ကိုရီးယားနိုင်ငံ အင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဌာနနဲ့ Social enterprise Noridanတို့က ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပဒေသာယဉ်ကျေးမှု အနုပညာအဖွဲ့ "Montant" မုံတန်းမှ အတူတကွ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်လို တဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
"MONTANT"ဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှ လူမျိုးများက အတူတကွ စုဝေးကာ နိုင်ငံတကာမှ တေးသီချင်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများကို တနေရာထဲမှာ စုစည်းပြီး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးခြယ်ခံရတဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟာ အစမ်းခန့်ကာလ၄လပြီးဆုံးပြီးနောက် အဖွဲ့ဝင် အတည်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by စိုးမိုးသူ at 10:00 PM0comments
Labels: ကိုရီးယားသတင်း, သုခုမရင်ပြင်, ဖျော်ဖြေရေး, မောင်းသတင်း
ကိုရီးယား၂ ကျော့ပြန် အီးပီလောင်းများ EPS-TOPIK ကိုရီးယား စာမေးပွဲထပ်ဖြေဖို့မလို
ကိုရီးယား အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် လာမည့် ဒီဇင်္ဘာလမှ အစပြု၍ ၊ အီးပီစနစ်အတိုင်း ကိုရီးယားမှ ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားသည့် အီးပီလုပ်သားများအတွက် ကိုရီးယားသို့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာရန် ကိုရီးယားဘာသာ အထူးစာမေးပွဲ (특별한국어 시험) ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားပါသည် ။
လက်ရှိ အီးပီစနစ်အရ ကိုရီးယားသို့ ရောက်လာကြသည့် အလုပ်သမားများ ကိုရီးယားပြည်တွင်း၌ ရက်လွန်နေထိုင်ခြင်းမရှိစေရန်အလို့ငှာ ပြည်ဝင်ရက်မှ ၄နှစ် ၁၀ လ ကျော်လျင် ကိုရီးယားမှ မလွဲမသွေ ပြန်လည်ထွက်ခွါကြရပါသည် ။
သို့ရာတွင် ပြည်တော်ပြန် အီးပီလုပ်သားများအနေဖြင့် ကိုရီးယားသို့ ပြန်လာလိုပါက အနည်းဆုံး ၆ လတာကာလ အနေခြားပြီးမှသာ ကိုရီးယားသို့ ထပ်မံဝင်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိပြီး ၊ အီးပီလုပ်သားဟောင်းများအတွက် သင့်တော်သည့် ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မရှိသေးသည့်အတွက် ၊ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာနိုင်ရန်မှာလည်း အီးပီလုပ်သားလောင်း အသစ်များနည်းတူ အစမှ ပြန်လုပ်နေရသဖြင့် တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရပြီးသူများ မူလတန်းစာမေးပွဲ ပြန်ဖြေရသလိုမျိုး ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုပါသည် ။
ထို့ပြင် အီးပီကိုရီးယားစာမေးပွဲ (EPS-TOPIK) ပြန်လည်ဖြေဆိုရန်မှာလည်း သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံမှန်အချိန်ဇယားမရှိသဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင် စာမေးပွဲပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိပြီး ၊ မည်သည့်အချိန်တွင် ကိုရီးယားသို့ ပြန်လာခွင့်ရမည်ဆိုသည်မှာ မသေခြာ မရေရာသည့်ကိစ္စလို ဖြစ်နေသဖြင့် ၊ အီးပီလုပ်သားများ ကိုရီးယားမှ ပြန်လည်ထွက်ခွါဖို့အရေးမှာ ရင်လေးဖွယ်ရာ အကြောင်းရင်း တစ်ခုလိုဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုပါသည် ။
ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း ကျွမ်းကျင် အီးပီလုပ်သားကောင်းများ ဆက်လက် အသုံးပြုခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ကိုရီးယားအစိုးရထံ အစဉ်တစိုက် တင်ပြ တောင်းဆိုလာကြပါသည် ။
သို့ဖြစ်ရာ ကိုရီးယားအစိုးရသည် အီးပီစနစ်တွင် ကိုရီးယားသို့ ၂ကျော့ပြန်လာလိုသည့် အီးပီလုပ်သားများအတွက် အတားအဆီးလိုဖြစ်နေသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖြေလျှော့ပေးသည့်အနေဖြင့် ၊ ကိုရီးယားသို့ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာရန် ပိုမိုလွယ်ကူပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အသစ်များကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါသည် ။
နည်းဥပဒေအသစ်အရ ၂ကျော့ပြန်အီးပီများအတွက် အထူးစာမေးပွဲအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် ၃ လလျင် အနည်းဆုံး ၁ ကြိမ် ၊ ကွန်ပြူတာအခြေခံစနစ် (CBT: Computer Based Test) ဖြင့် ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။
အဆိုပါ စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများသည် သာမန်အီးပီ ကိုရီးယား စာမေးပွဲ (EPS-TOPIK) ဖြေမည့်သူများထက် မြန်ဆန်မည်ဖြစ်ပြီး ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်အကြိုသင်တန်းများလည်း တက်ရောက်ရန်မလိုတော့ဟုလည်း ဆိုပါသည် ။
ထို့ပြင် ကိုရီးယားမှ ပြန်လည်မထွက်ခွါမှီ နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့သည့် စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွင် အနည်းဆုံး ၁ နှစ်အထက် လုပ်သက်ရှိခဲ့မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်က တောင်းဆိုလျင် နောက်ဆုံးလုပ်စက်ရုံ၌ ပြန်လည် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည် ။
အထူးကိုရီးယားစာမေးပွဲကို ဒီဇင်္ဘာလအတွင်း ထိုင်း နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ၊ လာမည့်နှစ်မှ အစပြု၍ မြန်မာအစရှိသော အခြားကျန်ရှိသောနိုင်ငံများတွင်လည်း စနစ်အတိုင်း ၃ လလျင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ပုံမှန် စစ်ဆေးသွားမည်ဟုဆိုပါသည် ။
နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားမူဝါဒရေးရာဌာနမှူး လီဂျယ်ကပ်(이재갑) က “ ဒီစနစ် လည်ပြီဆိုတာနှင့် ရက်လွန်နေမယ့် အီးပီ အလုပ်သမားတွေ အတော့်ကိုနည်းသွားပြီးတော့ကာ ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ တွေမှာလည်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေ ရဖို့ အများကြီးအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်” ဟူ၍ ထင်မြင်ချက် ပေးပါသည် ။ ထို့ အပြင် “ နောင်ကိုလည်း ရက်လွန်နေကြတော့မှာ မဟုတ်ဘဲ ၊ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ပြည်တော်ပြန်ကြမယ့်အီးပီလုပ်သားတွေ တိုးလာစေဖို့ ဦးစားပေးမယ့် မူဝါဒတွေကိုပဲ ခိုင်မာသည်ထက်ခိုင်မာအောင် လုပ်သွားမယ်” ဟု ပြောပါသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:27 AM0comments
Labels: ကိုရီးယားသတင်း, သတင်းဖတ်စာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, မောင်းသတင်း
ကိုရီးယား အစိုးရသည် အကျော်အမော် နိုင်ငံခြားသားများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်း အခြေချနေထိုင်ခွင့် ရရှိရေးအစီအစဉ်အဖြစ် ပွိုင့်စနစ်ဖြင့် အခြေချနေထိုင်ခွင့် (점수제 거주: F-2) ရရှိရေး အစီအစဉ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ၊ သတ်မှတ်ချက်များမှာ အတော်မြင့်နေသည့်အတွက် ၃ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အဆင့်မှီလျှောက်ထားရရှိသူ ၁ ဦးသာ ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည် ။
ယခုအခါ အဆိုပါ အခြေချ နေထိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက် လောက်မခက်ခဲသော်လည်း ၊ ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မည်ဟု ကိုရီးယားအစိုးရက မျှော်မှန်းထားသည့် အီးပီ အစရှိသည့် လုပ်သားလူရည်ချွန်များကို အထူးကျွမ်းကျင်သူဗီဇာ (특정활동: E-7) ထုတ်ပေးမည့်အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြန်ပါပြီ ။
အစီအစဉ်မှာ အီးပီလုပ်သားများ (비전문취업: E-9) ဧည့်လုပ်သားများ (방문취업:H-2) နှင့် ကမ်းရိုးတန်း သင်္ဘောသားများ (선원취업: E-10) များ အနေဖြင့် ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်း ၁၀ နှစ်အတွင်း အနည်းဆုံး ၄ နှစ်နေထိုင်ပြီးဖြစ်ခြင်း ၊ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ခြင်း ၊ မိခင်နိုင်ငံတွင် အနည်းဆုံး ပညာရေး သတ်မှတ်ချက် အဖြစ် အငယ်တန်းကောလိပ် (2년제 전문대학) တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ခြင်း ၊ ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်း အဆင့်-၃ (3급 이상 한국어능력) အထက်ရရှိသူ သို့မဟုတ် (Completion of Social Integration Program : KIIP) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ခြင်း ၊ ဝင်ငွေအဖြစ် ၁ နှစ်အတွင်း သာမန်အလုပ်သမား ၁စ်ယောက်၏ ၁နှစ် ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေထက်များသော ဝင်ငွေရရှိသူဖြစ်ခြင်း တည်းဟူသော အချက် (၄) ချက်နှင့် ညီညွှတ်ပါက အထူးကျွမ်းကျင်သူဗီဇာ (특정활동: E-7) ကို မိမိတို့နှင့် အနီးဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွင် ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည် ။
/Photo: Iju Oppa/
ကိုရီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနအနေဖြင့် လိုအပ်သော စီစစ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး မှန်ကန်ပါက အထူးကျွမ်းကျင်သူဗီဇာ (특정활동: E-7) ဖြင့် ၁ နှစ်နေထိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ဗီဇာသက်တန်း နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ၁နှစ်စီ ဆက်တိုက် တိုးသွားနိုင်မည်ဟုဆိုပါသည် ။ ထို့ပြင် အထူးကျွမ်းကျင်သူ ဗီဇာ(특정활동: E-7) ဖြင့် ၁နှစ်ပြည့်လျင်ဖြစ်စေ ၊ အထူးကျွမ်းကျင်သူဇီဇာဖြင့် နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်(사업기사) ရရှိလျင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ပွိုင့်စနစ်ဖြင့် အခြေချနေထိုင်သူ အရည်အချင်းများနှင့် ဘောင်ဝင်သည့် ဝင်ငွေရရှိသူဖြစ်လာလျင်ဖြစ်စေ အခြေချနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (거주: F-2) ကိုလျှောက်ထားရယူနိုင်ပြီး ၊ အထူး ကျွမ်းကျင်သူဗီဇာ (특정활동: E-7) ဖြင့် ၅နှစ်ပြည့်လျင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြေချနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (거주: F-2) ဖြင့်၃ နှစ် ပြည့်လျင်ဖြစ်စေ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ(영주: F-5) လျှောက်ထားရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည် ။
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ ၊ ယခုအခါ ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်း ၅သိန်းခန့်သော အီးပီလုပ်သားများနှင့် ဧည့်လုပ်သားများ၏ ၁၀မှ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်တို့သည် အသက် ၃၅ နှစ်အောက် ၊ အငယ်တန်းကောလိပ်ဘွဲ့ရများဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
အဆိုပါ ဗီဖာ ကို ၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှ အစပြု၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းနှင့် ၊ ခြွင်းချက်အဖြစ် ဟော်တယ်အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ ၊ အလုပ်ဗီဇာမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခြားဗီဇာ (G-1စသည်) သို့ပြောင်းထားသူများ ၊ ကိုရီးယားပြည်တွင်း၌ မရှိသူများ လျှောက်ထားခွင့် မရှိကြောင်း ၊ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက နိုင်ငံခြားသား အထွေထွေသတင်းဌာန (외국인종합안내센터) ဖုန်း ☏1345 ထံမေးမြန်းနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:54 AM0comments
Labels: သတင်းဖတ်စာ, အလုပ်ခွင်ရေးရာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, မောင်းသတင်း
ရူးရူးမိုက်မိုက်တို့ နှင့် ဆက်ရန်ရှိသေးသော…
ရေးသားသူ — ပေါ်ဦး
အခုတလော… သူ့အကြောင်း ရေးကြီးခွင်ကျယ် ဘာသံမှ မကြားရတော့သလောက်ပါပဲ။ တစ်ခါတလေမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အသံမကြားရတော့တာနဲ့ ငြိမ်သက်နေတာနဲ့ ပြီးသွားပြီ၊ ပျောက်သွားပြီလို့ မှတ်ယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမွှေးပြီး၊ သူ ကိုယ်တိုင်ပဲ ရှို့ခဲ့၊ စတင်ခဲ့တဲ့ မီးဟာ သူမရှိတော့ပေမဲ့ ဘယ်လောက် ထ်ိကြာအောင် တောက်လောင်နေဦးမယ် ဆိုတာ ဘ၀တွေနဲ့ရင်းခံ၊ ဒုက္ခတွေ တစ်လှေချည်းနဲ့ ရင်းခံခဲ့ရတဲ့ သူတွေမပြောနဲ့ အခြေခံစာနာစိတ်လေး အနည်းအကျဉ်းလောက် ရှိတဲ့သူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။
တကယ်ဆို သူသေတာမှ တစ်လလျော့လျောပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုပြီး ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ကဒါဖီရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်၊ သတင်းပိုင်းထဲက မြင်ကွင်းလေးကို အခုရက်ပိုင်းအတွင်း သွားသွားသတိရနေတာကြောင့်ပါ။
ကမ်းခြေမြို့တော် ဆာ့တ်ရဲ့ တစ်နေရာသော ရေပြွန်ပိုက်ရဲ့ အနား၊ သွေးဆာနေဆဲ လက်နတ်ကိုင် လူတစုရဲ့ အလယ် မြေ၀ါဝါပေါ်က အခင်းလေး တစ်ခုအပေါ်မှာ စုတ်ဖွားဖွားခေါင်းရဲ့ ဒဏ်ရာကနေ သွေးနီနီတွေ စီးကျနေတဲ့ပုံ၊ စကားပြောရင် လှုပ်ရှားနေကျဖြစ်တဲ့ သူ့လက်တွေအစား သူ့ပါးစပ်ကတော့ ဗလုံးဗထွေး လှမ်းပြောနေသေးတာ တွေ့ရတယ်။ သူ့ကို ပထမဦးဆုံး တွေ့တယ်ဆိုသူရဲ့ အပြောအရတော့ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာတုန်း လို့ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ညှာတာကြပါဦး လို့လည်း တောင်းပန်သေးတယ်လို့ ပြောတယ်။
ညှာတာကြပါ ဦး တဲ့လား….
ကယောင်ကတမ်းနဲ့ ရန်သူလက်ထဲ ရောက်နေပြီ၊ သေဖို့သိပ်ကို နီးစပ်သွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတာနဲ့ တပြိုင်နက် ရလိုရငြား တောင်းပန်တာကတော့ သိပ်မထူးဆန်းပေမဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာတုန်း ဆိုတဲ့ အမေးကတော့ ကျနော့် အတွက် စဉ်းစားစရာ ဖြစ်သွားပါတယ်။
သူ ဘာဖြစ်လို့ ဒီမေးခွန်းကို မေးခဲ့တာလဲ..
သတင်းတွေအရတော့ သူ့ကို စမိမိချင်းမှာ သေလောက်တဲ့ အခြေအနေ မရှိသေးဘူးလို့ ပြောကြတယ်၊ မြင်ကွင်းအရလည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ကြောက်လို့မေးတဲ့ စကားတော့ ဟုတ်ဟန် မတူသေးပါဘူး။ ဒါဆို သူ့လူ ကိုယ့်လူ မကွဲတဲ့အပေါ် ဟန်ကိုယ့်ဖို့ မာန်သူ့ဖို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဟောက်မေး မေးတာများလား။ ဒါမှမဟုတ် တကယ်ကို အခြေအနေ အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ် နားမလည်နိုင်လို့လား။ ဒါက ဖြစ်နိုင်ချေလေးတွေ ကိုယ့်ဘာသာ လျှောက်စဉ်းစားမိတာ တွေပါ။ သူ့ရင်ထဲက ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုလုပ် မြင်နိုင်မှာလဲ။ ဟုတ်တယ် မမြင်နိုင်ဘူး။ မြင်ရရင်လည်း အခုလို တောင်တောင်အီအီ လျှောက်တွေးနေမိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုဟာက.. ဧကရာဇ်မင်းတစ်ပါးလို နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော် ထင်သလို အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် တစ်ဦးရဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်း၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ ဆွေမျိုး တစ်သိုက်လုံး ထင်သလို ပြုမူနေထိုင်ခဲ့သလို လူတကာကိုလည်း သူ့သဘောတော်ကျ နေစေခဲ့သူ။ သေချာပါတယ်လေ… ဇာတ်သိမ်းခန်းဟာ ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ စိုးစံနေဆဲ ကာလတစ်လျှောက်မှာ တစ်ခါမှကို တွေးမိ၊ စဉ်းစားမိခဲ့မှာ မဟုတ်သူရဲ့ သေငယ်ဇောကပ်ချိန်၊ အဲဒီလိုအချိန် သူ့ရင်ထဲမှာ ခံစားချက်တွေ ဘယ်လို ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ အတွေးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ လေ့လာစောင့်ကြည့် နေသူတွေကတော့ ဇာတ်သိမ်းက မလွမ်းဘဲ ကြမ်းလောက်တယ်ဆိုတာ အုံကြွမှုတွေ စဖြစ်ပြီး နှစ်လ အကြာလောက်ကတည်းက ရိပ်မိသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်ချက် ပေးကြ၊ ပြောကြပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ သူ့(ကဒါဖီ) အနေနဲ့ ကြိုမမှန်းဆနိုင်ဘဲ နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တွက်တယ်။ အဲဒါထက် ဘယ်လို ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ အကြောင်းအရာတွေကများ သူ့ကို ဒီအခြေအနေထိ ဖြစ်သွားအောင် စွဲဆောင်ထားခဲ့ပါသလဲလို့ ပိုပြီး သိချင်မိတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ သူ့မှာ အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်နဲ့ သန္ဓေကျထားတဲ့ စရိုက်စုံအောင်ရှိတဲ့ သားတွေနဲ့ သမီးတစ်ဦး ရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိအောင် ရှိနေခဲ့သူကတော့ တစ်ချိန်က အာဏာလွှဲပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ ဖခင် ကဒါဖီရဲ့ ပြန်လည်မြှောက်စားမှုကြောင့် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အကြီးအကဲ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေလျှက်ကနေ ဖခင်နဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း သေဆုံးခဲ့ရသူ သား မိုဒါဆန်ကဒါဖီ တစ်ဦးတည်းသာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်းကိုယ်စီ အိမ်ပိုင်ရမည်ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်ချက်နဲ့ ရွှံ့နံရံကပ် သက်ကယ်မိုး အိမ်တွေနေရာမှာ နေအိမ်တိုက်တန်းလျားတွေ..၊ ရေခက်ခဲတဲ့ ဒေသတွေအတွက် ခေတ်မီရေပေးဝေရေး စနစ်တွေ ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့သူ၊ ပြည်တွင်း စာတတ်ဦးရေ တိုးတတ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သလို အာဖရိကရဲ့ လူနေမှု အမြင်းမားဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုကို ဖြစ်တည်စေခဲ့တဲ့ အချက်တွေကတော့ မငြင်းနိုင်တာ အမှန်ပါ။ ဂုဏ်ယူဖွယ် တစ်ခုကတော့ (ကျနော့်အမြင်အရ) ကြွေးမြီကင်းသော တိုင်းပြည် အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း သူ့စွမ်းဆောင်ချက် သက်သက်လို့ ပြောရမှာထက် ပင်ကိုယ် ပထ၀ီ အနေအထားအရ တည်ရှိနေတဲ့ သယံဇာတနဲ့ လူဦးရေ အချိုးအစား၊ ခေတ်ကာလ အခြေအနေနဲ့ အခွင့်အလမ်းကောင်း ကူပံ့ပေးမှုတွေ ရှိနေခဲ့တာကြောင့်လည်း ပါတယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကြားမှာ မနည်းလှတဲ့ အုပ်စိုးသက်တမ်း ၄၂ နှစ်တာ အတွင်းက လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်တော့ မေးစရာတွေ တစ်ပုံကြီး ဆိုသလိုပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူလုပ်ပေးခဲ့တာတွေ ရှိတာလည်း အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့အတွက်၊ ဒါမမဟုတ် ဘယ်သူ့အကြိုက် လုပ်ခဲ့တာလဲ၊ ပြည်သူ့အကြိုက်လား… ကိုယ်ထင်တာ၊ ကိုယ်ကြိုက်တာ လုပ်ခဲ့တာလား ဆိုတာတော့ နိုင်ငံစီးပွားရေးကို ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀န်းနဲ့ အပေါင်းအပါ တစ်စုကသာ ချုပ်ကိုင်ထားခဲ့တာ၊ နိုင်ငံငွေကြေးကိုလည်း ကိုယ်ကျိုးအတွက် လိုသလို သုံးစွဲရုံတင်မက ဖုံးကွယ်ထိန်ဝှက် ထားခဲ့တာတွေနဲ့ အခွင့်အလမ်းမှန်သမျှ တားဆီး ပိတ်ပင်ထားခဲ့မှုတွေက သူသူကိုယ်ကိုယ် သိပြီးသား အထင်းသားမို့ အဖြေမလိုတော့တဲ့ အမေးဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်တာလဲလို့ မေးရင် လစ်ဗျန်းတွေသာမက ကမ္ဘာ့နေရာ အရပ်ရပ်က လူတွေအားလုံး အာဏာရှင် မို့လို့ပေါ့လို့ တညီတညွတ်တည်း ဖြေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ထင်တာကတော့ လူတိုင်းနီးပါး အာဏာ ရှိချင်ကြပါတယ်။ ရှိလည်း ရှိကြပါတယ်။ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလိုလည်း မိသားစုကြား၊ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားမှာ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ၊ ဒေသအလိုက်၊ နယ်ပယ် ၀န်းကျင်အလိုက၊် တစ်ချို့ဆို နိုင်ငံတွေရဲ့ အလယ် ကမ္ဘာအနှံ့တောင် အာဏာ ရှိကြပါတယ်။ ဒီအထိ ပြဿနာ မဟုတ်သေးပေမဲ့ အဲဒီအာဏာကို စွဲလမ်းလွန်ပြီး အာဏာရူး ဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုယ်သူတင်မက အများနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့ အထိ အကျိုးဆက်တွေ တသီတတန်းကြီး ပေါ်ပေါတ်လာမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရူးကိုမှ တခါထပ်ခွဲရင် အရူးပါးနဲ့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်းရူးသူ ဆိုပြီး ခွဲနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကဒါဖီကို ကြည့်လိုက်ရင်.. ထူးဆန်းစွာပဲ အင်္ဂါရပ် နှစ်ခုစလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူလို့ ပြောနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ ရာစုနှစ် တစ်ဝက်နီးပါးလောက် သရဖူ ထိမ်းထားနိုင်ခဲ့သူ၊ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့တွေ သိပ်ပြောပြော နေကြတဲ့ လူအခွင့်အရေးတို့၊ သာတူညီမျှရှိမှုနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တို့ ဖော်ဆောင်ပေးရာ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တောင် ရခဲ့သေးတာဆိုတော့ အဲလို လူတစ်ယောက်ကို အာဏာရူး အရူးပါးလို့ဆိုရင် ငြင်းကြမယ် မထင်ပါဘူး၊ အာဏာကို အရင်တည်ဆောက်ပြီးရင် အာဏာ ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်တို့ရဲ့ ဥပဒေသအတိုင်း အတွင်းလူ၊ အပြင်လူ၊ ဟိုလူ၊ ဒီလူ ရန်သူလို့ ထင်ရသူတွေကို ရှင်းခဲ့သလို၊ တဘက်ကလည်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ဟန်ဆောင်မှုတွေ ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပုန်ကန်သူ သားအရင်းကို ပြန်စည်းရုံးပြီး လူရုံလူရင်း အဖြစ်သာမက သေဖော်သေဖက်အထိ သစ္စာရှိအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာ၊ ဒေသတွင်းသာမက နိုင်ငံတော်တော်များများကပါ ဟုတ်နိုးနိုး ဖြစ်သွားအောင်အထိ သားဖြစ်သူ ဘေ့စ်ကဒါဖီကို ကြားခံထားပြီး နိုင်ငံရေး လှည့်စားကွက်တွေ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပုံတွေက သူ့ရဲ့ ပါးနပ်မှုအရည်အသွေးကို အခြားသူတွေ သတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့… အဲဒီ အရူးပါး လွန်မှုကပဲ သူ့ကိုယ်သူ ဧကရာဇ်တစ်ပါးလို မာန်မောက်ရင်း ရူးရူးမိုက်မိုက် အာဏာရူးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ဘ၀ကိုပါ ချောက်ထဲ ရောက်တဲ့အထိ ဆွဲချသွားခဲ့တာလို့ ကောတ်ချက်ဆွဲရင်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
စာတတ်မြောတ်မှု များလာပေမဲ့ ပညာတတ်ရှားလာပြီး အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ တနေ့တခြား တိုးလာနေမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးလာမှုကြောင့် ဆင်းရဲသား လူတန်းစားတွေ များလာတာ၊ အခွင့်အရေးဆိုတာ အတောင်ပံ ဘယ်နှစ်ဖက်ပါလဲ၊ တန်းတူညီမျှမှုဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားလို့ မေးယူရလောက်အောင် မုတ်ဆိတ်ရှည် ထားတာနဲ့တင် ဗလီသွားတာနဲ့တင် အဖမ်းခံ ထောင်ချခံကြရတဲ့ ဘ၀၊ လူထု စုဝေးဖို့ဆိုတာထား၊ ပြောချင်တာတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောခွင့်မရှိကြ၊ မရခဲ့ကြတဲ့ ဘ၀ထဲက လူတွေကို… သွားလေသူကြီး အနေနဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာတုန်း… ဆိုတဲ့စကားကို တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မေးခဲ့ဘူးပါသလား…၊ ညှာတာပါဦး လို့ အောက်ကျို့ခယ တောင်းဆိုခဲ့သူတွေကိုတောင် သဘောလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခွင့်အရေး မြည်းစမ်းခွင့် တကြိမ်တခါလောက် ပေးခဲ့ဖူးပါသလား..၊ အတုအယောင် လုပ်ဆောင်ပြချက်တွေ၊ ဖုံးကွယ် လိမ်ညာထားခဲ့မှုတွေ ဗလပွနဲ့ ပြည်သူကြားက ပြည်သူဆိုတာပဲ ရှိပြီး၊ အုပ်ချုပ်သူ ဆိုတာလည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မေ့သွား၊ မေ့ထားခဲ့သူ၊ အာဏာဆိုတာ ရှိကောင်းလို့ ရှိနေတာ မှန်ပေမဲ့ ရူးသွပ်သွားပြီ မူးမိုက်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ ကြေကွဲဖွယ် အကျည်းတန် ဇာတ်သိမ်းရမယ် ဆိုတာ မတွက်ဆ၊ မယုံကြည်ခဲ့ပုံက သူ့နောက်ဆုံးအချိန် အထိ စွဲမြဲနေပုံ ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မြင်သာတာက တခြားသော လူမျိုးတွေ၊ နိုင်ငံတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ခဏဖယ်လို့ ကိုယ့်အတွင်းလူ၊ ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ မျက်နှာကိုမှ မကြည့်ခဲ့သူ၊ ကြည့်လေ့မရှိသူ၊ မကြည့်ချင်သူတွေ အတွက် ကဒါဖီ မီးစာကုန်ချိန်က သိပ်ကို မြင်သာထင်ရှားတဲ့ ထိတ်လန့်ကြေကွဲဖွယ် ဥပမာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးမှုဟာ ဘယ်သူ့လက်ချက်လို့ အတိအကျ အမည်မတပ်နိုင်ပေမဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသား လစ်ဗျန်းတွေရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကတော့ အငြင်းမထွက်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်း အစဟာ မြို့တော်ရုံးစိုက်ရာ ဘန်ဂါဇီက အနာဂါတ်တွေ လမ်းဖွင့်ချင်ကြတဲ့၊ လွတ်လပ်ပုံရိပ်တွေ ထုဆစ်လိုကြတဲ့ လစ်ဗျား ပြည်သူပြည်သားတွေ ဖြစ်သလို၊ အာဏာရူးကို ပွဲသိမ်းပေးခဲ့သူတွေဟာလည်း အမေရိကန်တွေ၊ နေတိုးတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပ်ကို သတိထားသင့်တဲ့ အချက်လို့ မြင်ပါတယ်။ ခေါင်းကို ကျည်ဆံတွေ ပစ်သွင်းနိုင်တာ၊ လက်ရဖမ်းဆီး ထိုးကြိတ၊် ရိုတ်ပုတ်မှုတွေက ပြဿနာရဲ့ အဆုံး ဖြေရှင်းရမဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေ မဟုတ်ပေမဲ့ မျိုးဆက်နှစ်ဆက် နီးပါးလောက် ပေါတ်ကွဲ ခံစားခွင့်မရ ခဲ့သူတွေရဲ့ ဒေါသပေါတ်ကွဲမှုကို မှားတယ် များတယ်လို့ ပြောရမှာ ခက်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့လည်း ထိုက်တန်တယ် ဆိုပြီး အားရကျေနပ် သွားလိမ့်မယ်လို့ တဖန်ဆိုရအောင်လည်း တိုင်းပြည် ပြန်ပြီး နာလန်ထူအောင်ကိုပဲ တော်တော်ကြိုးစားကြရဦးမဲ့ အခြေအနေ။ ရှင်းစရာတွေက တပုံတခေါင်း၊ ပြဿနာတွေက တသီတတန်းကြီး ကျန်နေသေးတဲ့ အဖြစ်။ ဆိုတော့.. တကယ်ပါ။ နာတာမှ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ နာကျင်ကျန်ခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေအဖြစ်ပါ။
ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူ့ကြောင့်ပဲ စစ၊ ဘယ်သူတွေကပဲ ၀င်ကူညီကူညီ၊ ဘယ်ဘက်ကပဲ ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် ကောင်းသောစစ်ဆိုတာ မရှိသလို၊ မကောင်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလည်း မကြားဖူးပါဘူး။ သေဆုံးခြင်းနဲ့ လေလွင့်ပျောက်ကွယ်ခြင်း၊ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ ရင်မောဖွယ် ခရီးကြမ်းရှည်တို့ကိုသာ နောက်ဆက်တွဲ ချန်ရစ်ခဲ့လေ့ရှိတဲ့ စစ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို လစ်ဗျန်းတွေသာမက ကျနော်တို့တွေ ကောင်းကောင်း နားလည်နေခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတိမြေမှာ သံဝေဂရဖွယ် ဇီဝိန်ကြွေခဲ့သော အာဏာရူးမိုက်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်အင်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ စာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခွင့် မရလိုက်သော်လည်းဘဲ ခေတ်သစ်ရဲ့ သမိုင်ဝင် ကျဆုံးခန်း ဆိုတာ ဟောဒီ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ရှိနေသေးတဲ့ ရှိလာဦးမဲ့ အာဏာရူးများ အတွက် ကဒါဖီ မီးစာကုန်ချိန်က အထူးသင်ခန်းစာယူဖွယ် ခြောက်ခြားဖွယ် သမိုင်းသာဓက အဖြစ်နဲ့ ထာဝရ တည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ပြည်သူတွေ လိုလားတာ တိုက်တန်းလျားတွေ မဟုတ်ဘူး… လုံခြုံမှု။
ပြည်သူတွေ ငတ်မွတ်တောင့်တတာ ရေချို မဟုတ်ဘူး… စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာရဲ့အေးမြမှု။
ပြည်သူတွေ တကယ်လိုအပ်နေတာ ငွေကြေးသက်သက် မဟုတ်ဘူး… လွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေး။
အားလုံးထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ပြည်သူတွေကို မလိမ်ညာ၊ မလှည့်ဖျားဖို့ ဆိုတာကို သွားလေသူ မောင်ကဒါဖီ တို့လို အာဏာရှင်ကြီးတွေ တကယ်ပဲ မသိခဲ့တာလား၊ မသိသလိုဘဲ နေခဲ့တာလား ဆိုတာကတော့…။
(၁) ၀ီကီပိဒိယ စွယ်စုံကျမ်း
(၂) ကဒါဖီသေဆုံးပုံ စီအန်အန် သတင်းရုပ်သံ
(၃) ၂၀၁၁ ခု၊ အောက်တိုဘာ ၂၃ ထုတ်- အင်တာနေရှင်နယ် ဟရိုးတရီဗြူး သတင်းစာ
ဆောင်းပါးရှင် ပေါ်ဦးမှာ ကိုရီးယားတွင် ခေတ္တနေထိုင်လျက် ရှိသည့် စာပေ၀ါသနာရှင်တဦး ဖြစ်ပါသည်။
Posted by သူကြီး at 8:26 PM2comments
Labels: ဖတ်စရာ, အယူအဆ, ဆောင်းပါး
မြန်မာသင်္ဘောသားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ကိုရီးယားသင်္ဘော နစ်မြုပ်
နိုဝင်ဘာ ၂၁ရက်နေ့ ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ညနေ ၄နာရီခန့်တွင် ကိုရီးယား သင်္ဘောကုမ္ပဏီ တခု ဖြစ်သော PANSTAR SHIPPING CO,LTD ပိုင် တန်ချိန် ၁သောင်း၅ထောင်ဆန့် BRIGHT RUBY အမည်ရှိ ကုန်တင်သင်္ဘောသည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် နစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှ ကုန်စည်များ တင်ဆောင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခုတ်မောင်းနေစဉ် ဟောင်ကောင်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ကီလိုမီတာ ၃၅ဝခန့် အကွာအဝေးတွင် နစ်မြုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသင်္ဘောတွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံသား ၉ဦး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၂ဦး စုစုပေါင်း ၂၁ဦး စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့ပြီး ထိုအနက်မှ ကိုရီးယားနိုင်ငံသား ၄ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ဦးတို့အား ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ကိုရီးယား ၅ဦးနှင့် မြန်မာ ၄ဦးတို့မှာမူ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောနစ်မြုပ်ရခြင်း အကြောင်းမှာမူ လက်ရှိအချိန်ထိ သိရှိနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ သင်္ဘောသား ၉ဦးအား ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှ ရဟတ်ယာဉ်များ နှင့် ထိုသင်္ဘောနစ်မြုပ်သည့် နေရာ ဝန်းကျင်ရှိ သင်္ဘောများဖြင့် ပူးပေါင်းကာ အပူတပြင်း ရှာဖွေလျှက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ယခု နစ်မြုပ်သွားသော BRIGHT RUBY ကုန်တင်သင်္ဘောသည် ၂ဝဝ၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ဆိုမာလီးယား ပင်လယ်ဓါးပြများ၏ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာသည့် သင်္ဘောဖြစ်သည်။ PANSTAR SHIPPING CO,LTD တွင် မြန်မာသင်္ဘောသား ၆၇ဦး အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။
ကိုရီးယား သတင်းဋ္ဌာနများ၏ ထုတ်လွှင့်ချက်အား ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
Posted by ကိုလူချစ်(ကိုရီးယား) at 10:04 AM0comments
Labels: ကိုရီးယားသတင်း, မောင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာ
ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) နိဗဒ္ဓအလှူရှင်များစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၊ ထပ်ဆင့် ကုသိုလ်ပွါးများနိုင်
ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) ယဉ်ကျေးမှုအသင်းအနေဖြင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာများ အချိန်နှင့် အမျှ အစဉ်အမြဲ ကုသိုလ်ရရှိနေစေရေး အစီအစဉ်အဖြစ် နိဗဒ္ဓအလှူတော် အစီအစဉ်ကို စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကိုရီးယားနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းမှ ပါရမီရှင်များ က ၊ မိမိတို့ သဒ္ဓါအားအလျောက် ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည် ။
အဆိုပါ လှူဒါန်းမှုများအတွက် ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)က ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး အထူးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းနှင့် ၊ ပါရမီရှင်တို့၏ အလှူတော်ကို အများပြည်သူတို့ မုဒိတာပွါးပြီး ထပ်ဆင့်ကုသိုလ်တော်ယူနိုင်ကြစေရန်အလို့ငှာ ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) နိဗဒ္ဓအလှူရှင်များစာရင်း ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည် ။
ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) နိဗဒ္ဓအလှူရှင်များစာရင်း ကို ဤနေရာ (Click Here) တွင် ကြည့်ရှုပြီး မုဒိတာပွါး ကုသိုလ်တော်ယူနိုင်ကြပါကြောင်း နှင့် ကျန်ရှိနေသေးသော အလှူရှင်များစာရင်းကိုလည်း ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။
သူတော်ကောင်းဓါတ် တရားမြတ် လွမ်းပတ် ကမ္ဘာ တည်စေသော် ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 8:07 AM0comments
Labels: ဓမ္မဒူတအလှူ, ဘာသာရေး, သတင်းဖတ်စာ, သာဓုအနုမောဒနာ
အင်ချွှန်း နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား အထောက်အကူပြုရေး စင်တာမှ ကြီးမှူးပြီး ကျင်းပမည့် ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင် ကိုရီးယားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား မည်သူမဆို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်း ဝါသနာပါသူများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် အသိပေး နိူးဆော်အပ်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သည့် အချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁) ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်လိုသည့် ဓါတ်ပုံများမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်စဉ် ပျော်ရွှင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည့် အရာများအား အမှတ်တရ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံများ။
၂) ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် ဓါတ်ပုံဆိုဒ် = ၈×၁ဝ
၃) ဓါတ်ပုံနောက်ကျောတွင် နာမည်အပြည့်အစုံ၊နိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်တို့အား ရေးသားပေးရပါမည်။
၄) ၂ဝ၁၁-၁၁-၂၇ (တနင်္ဂနွေ)နေ့ ညနေ ၆နာရီအထိ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့ပေးရပါမည်။
၅) ၂ဝ၁၁-၁၂-ဝ၄ (တနင်္ဂနွေ) နေ့တွင် ဆုရဓါတ်ပုံများအား ကြေငြာအသိပေးပြီး ဆုချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၆) ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဓါတ်ပုံများအနက်မှ ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယ ဆုများ ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၇) ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသည့် ဓါတ်ပုံများ ပေးပို့ရန်နှင့် အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများအနေဖြင့် မြန်မာ စကားပြန်ဖြစ်သူ မသန့် ဝ၁ဝ-၅၅၉ဝ-၈၈၄၃ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Posted by ကိုလူချစ်(ကိုရီးယား) at 7:22 AM 1 comments
Labels: ကြော်ငြာ, မောင်းသတင်း
သက်ဆိုင်ရာ ဓမ္မဒူတ-နိဗဒ္ဓ အလှူရှင်များသို့ အသိပေး နှိုးဆော်လွှာ
ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ အနေဖြင့် ၊ ဓမ္မဒူတ-နိဗဒ္ဓအလှူတော် အစီအစဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း ၊ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အလှူရှင်များ စသည်အားဖြင့် ၄ ဖက် ၄ ဌာနမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးတွဲ/ညှိနှိုင်းပြီး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် ။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ၊ အလှူရှင် ၁၂ ဦးတို့ထံမှ အလှူတော်ငွေ ၃သိန်း ၆သောင်းဝမ်ကို ဓမ္မဒူတဘဏ် စာရင်းသို့ ကောက်ခံ ပေးသွင်းမည့် အစီအစဉ် (Database Program) ရေးသွင်းရာတွင် အလှူရှင်များထံမှ ကောက်ခံရန်အလှူငွေ (청구금액) ဟု ရေးသွင်းရမည့်အစား ၊ အလှူရှင်များထံမှ ရရှိပြီးအလှူငွေ (출금금액) ဟု မှားယွင်းရေးသွင်းခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည် ။
အလှူရှင်များထံမှ ရရှိပြီးကြောင်း စာရင်းရေးသွင်းထားသော်လည်း ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များအနေဖြင့် အမှန်တကယ် ကောက်ခံထားခြင်းမရှိခဲ့ပါသဖြင့် ပါရမီရှင်တို့၏ အလှူတော်အစီအစဉ်များမှာလည်း အထမမြောက်ခဲ့ကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည် ။
သို့ဖြစ်ရာ ပါရမီရှင်တို့၏ အလှူတော် အထမြောက်အောင်မြင်စေရေးအလို့ငှာ လည်းကောင်း ၊ အမှားပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် လည်းကောင်း ၊ အောက်ဖော်ပြပါ အလှူရှင် ၁၂ ဦးတို့၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွက် အလှူတော်ငွေကို ယခု နိုဝင်္ဘာလ သို့မဟုတ် ဒီဇင်္ဘာလတွင် အစားထိုး ကောက်ခံ လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည် -
လ တစ်လအတွင်း အလှူတော် ၂ ထပ် ကောက်ခံသကဲ့သို့ ဖြစ်နေမည် ဖြစ်သဖြင့် ၊ အလှူရှင်များအနေဖြင့် မရှင်းမရှင်းသော စိတ်အာရုံတို့ဖြင့် ဘဝင်နှလုံး မသာမယာ မဖြစ်စေကြစေရန်နှင့် ၊ မိမိတို့ အလှူတော် အတွက် ဝမ်းမြောက်ကြည်သာစွာ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြစေရန်အလို့ငှာ နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ ကြိုတင် အသိပေး နှိုးဆော်လိုက်ရပါကြောင်း ။
ဗုဒ္ဓသာသနံ ၊ စိရံတိဋ္ဌတု ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်နိုဝင်္ဘာလ ၂၂ ရက် ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 1:04 AM0comments
Labels: ဘာသာရေး, သာဓုအနုမောဒနာ, အလှူ, ကြေညာချက်, မောင်းသတင်း
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာညီအကိုမောင်နှမ အပေါင်းတို့ခင်ဗျား...
၂၇.၁၁.၂၀၁၁ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီး၌
အနန္တငါးပါး ဦးထိပ်ထား၍ ဘဝအနှစ် ကုသိုလ်စစ်ကို ရလိုစိတ်သန် သဒ္ဓါမှန်ဖြင့်
နိဗ္ဗာန်ရည်မျှော် ကုသိုလ်တော်ပွဲကြီးကို အလှူရှင်များဖြစ်ကြသော ကိုရီးယားရောက်
စိတ်ကောင်း မိတ်ကောင်း နှစ်ကောင်းပြည့်စုံ လွှမ်းခြုံဆင်နွဲ ကုသိုလ်တော်ပွဲကြီးသို့
ကြွရောက်ချီးမြှောက်ကြပါရန် မေတ္တာရှေ့ထား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အစီစဉ် - နံနက် ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲနှင့် နေ့လယ် ဒန်ပေါက်ထမင်းတို့ဖြင့်
ဧည့်ခံကျွေးမွေးပြီး နံနက် ၉း၀၀ နာရီအခန့် ရေစက်ချ တရားတော်
အင်ချွန်းမြို့ ၊ဘူဖြောင်း ၊မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် ။
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 10:31 PM0comments
မီဝဲလ် (miwel) ၅ ကြိမ်မြောက် ၊ ကိုရီးယားစကားပြောပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်
ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၁ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) ၁၃း၃၀ မှ ၁၇း၀၀
နေရာ ။ ဂုရို ၊ မြို့နယ်ခမ်းမ ၊ ၅ ထပ် ( 구로구청 5층 대강당)
ကိုရီးယားပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများ နှင့် ကိုရီးယားအိမ်ထောင်ဖက်နိုင်ငံခြားသားများ
- ၁ ။ ငါ့အမြင် ကိုရီးယားအသိုက်အဝန်း(내가 본 한국사회)
- ၂ ။ ငါ့ရဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက် (나의 꿈)
- ၃ ။ ငါ့မိသားစု (나의 가족)
- ၁။ ပထမဆု ၁ ယောက် ဝမ် ၅သိန်း
- ၂။ ရွှေတံဆပ်ဆု ၁ ယောက် ဝမ် ၃ သိန်း
- ၃။ ငွေတံဆပ်ဆု ၂ ယောက် ဝမ် ၂ သိန်းစီ
- ၄။ နှစ်သိမ့်ဆု ၃ ယောက် ဝမ် ၁ သိန်းစီ
မှတ်ချက် ။ ယှဉ်ပြိုင်သူ အားလုံးကို အမှတ်တရ လက်ဆောင်များပေးပါမည် ။
လျှောက်လွှာ တင်ရန် -
- အချိန် ။ ၂၀၁၁ နိုဝင်္ဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၁ နိုဝင်္ဘာ၃၀ ရက် ညနေ ၅နာရီထိ ။
- လျှောက်လွှာ (/ဒီမှာ နှိပ်ပြီး ဆွဲချယူပါ /)
- ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်အကြောင်းရေးသားချက် (၂ မျက်နှာ ၊ ၁၂ ဖေါင့် ၊바탕체ဖေါင့် )
- နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ
- ဗီဇာ မိတ္တူ
ပေးပိုရန် နေရာ -
- အီးမေးလ် miwel@hanmail.net သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်
- ဆက်သွယ်ရန် ☎ 02-858-4115
မှတ်ချက် ။ လျှောက်လွှာရှင် တစ်ဦးချင်းထံ သီးသန့် ဆက်သွယ်ပြန်ကြားပါမည်။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 6:43 AM0comments
Labels: ကိုရီးယားစကား, ကိုရီးယားသတင်း, သတင်းဖတ်စာ, ကြော်ငြာ, မောင်းသတင်း
လူဆိုးဂိုဏ်း ဆန်ဆန် လူသတ်မှု မြောက်ဥက္ကလာတွင် ဖြစ်ပွား
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ။
ဓားရှည်များ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မျက်နှာဖုံးစွပ်လူ ၁၅ ဦးခန့်က နိုဝင် ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီကျော် ကျော်တွင် စားသောက်ဆိုင်အတွင်း ထိုင်နေသော အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဆိုင်အတွင်း ဝင်ရောက်ကာ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နွယ်သာကီလမ်းအတွင်း မှ မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများ နှင့် ဝေဘာဂီ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတို့ထံမှ သိရသည်။
ယင်းညက ဝေဘာဂီ (၁) ရပ်ကွက် ဘက်မှ မောင်းနှင်လာသော အဖြူရောင်ူငါ့အွှမကခု ယာဉ်တစ်စီး သည် (က)ရပ်ကွက် နွယ်သာကီ (၆) လမ်းထိပ် တွင် ရပ်တန့်ကာ အဆိုပါကားပေါ်မှ မျက်နှာဖုံး စွပ်ထားသည့် လူများဆင်းလာ ပြီး အသက် (၃ဝ) အရွယ် ဦးကျော်မင်း ထိုင်နေသော စားသောက်ဆိုင်အတွင်း ဝင်ရောက်၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း ၊ ဦးကျော်မင်းနှင့်အတူ ထိုင်နေသူ မိတ်ဆွေ များနှင့် ယင်းလမ်းထိပ်ရှိ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်မှ မျက်မြင်များက ပြောဆိုကြသည်။
''အဖြစ်အပျက်က မြန်လွန်းတယ် ။ နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက်အတွင်းပဲ'' ဟု သေဆုံးသူ ဦးကျော်မင်းနှင့်အတူ ထိုင်နေသူ အသက် ၃ဝ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကဆိုသည် ။
ဓားရှည်ကိုင် မျက်နှာဖုံးစွပ်ထား သူများသည် ချက်ချင်းပင် ကားပေါ်သို့ ပြေးတက် မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားကြ ကြောင်း၊ ယာဉ်နံပါတ်ပြားကို စတစ်ကာ ဖြင့် ဖုံးအပ်ထားသဖြင့် ကားနံပါတ် မမှတ်မိလိုက်ကြောင်း အဆိုပါ ကားရပ် ထားရာအနီးရှိ လမ်းထိပ်လက်ဖက်ရည် ဆိုင်တွင် ထိုင်နေသူများက ရှင်းပြသည်။
''တစ်ကိုယ်လုံး ရစရာမရှိဘူး။ သွေးတွေလည်း အိုင်နေတာပဲ။ ဆေးရုံ ကိုချက်ချင်းပို့ပေမယ့် အရေးပေါ် ရောက်တော့ ဆုံးသွားတယ်'' ဟု အနီးရှိ တက္ကစီကားဖြင့် ဆေးရုံလိုက်ပါပို့ဆောင် ပေးခဲ့သူ ဦးကျော်မင်း၏ မိတ်ဆွေက ဆိုသည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ The Voice Weekly က ဝေဘာဂီရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းသို့ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ခန့်တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းရာ တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ''ညတွင်းချင်းပဲ အမှုဖွင့်ထား ပါတယ် ။ စခန်းမှူးလည်း ရင်ခွဲရုံမှာပဲ ရှိတယ်'' ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားသည် ။
- The Voice Weekly (7/49)
Posted by M-netizen at 2:27 PM0comments
Labels: ဘ၀နေဟန်, ယဉ်ကျေးမှု, ပြည်တွင်းသတင်း, အမှုအခင်း, မောင်းသတင်း
ပြည်ပရောက် အလုပ်သမားများ ၊ သင်္ဘောသားများ နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ ဒေါ်လာငါးထောင်မှ ငါးသောင်းတန် ကားသစ်များ သွင်းခွင့်ပြုမည်
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ။
မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တို့တွင် သတ်မှတ်ထားသော အမေရိကန်ဒေါ်လာပမာဏထည့်သွင်းထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၊ သင်္ဘောသားများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များကို အမေရိကန်ဒေါ်လာငါးထောင်မှ ငါးသောင်းအထိ တန်ဖိုးရှိသော မော်တော်ယာဉ်များ အဆင့်လိုက် တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနငါးခု၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည် ။
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များဆိုပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သိန်းနှင့်အထက် တင်ပို့ထားပြီး ဘဏ်ထဲတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာတစ်သိန်းလက်ကျန်ရှိပါက ဒေါ်လာငါးသောင်းအထိ တန်ဖိုးရှိသော မော်တော်ယာဥ်တစ်စီး စီ တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနတွင် လိုင်စင်ရယူဆောင်ရွက်နေသော ဟိုတယ်/ မိုတယ်/တည်းခို ရိပ်သာလုပ်ငန်းများနှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းရှင်များတွင် ၄င်းတို့၏ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း၌ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသောင်းရှိပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်သောင်းငါးထောင်အထိ တန်ဖိုးရှိသော မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးစီ တင်သွင်း ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်းသို့ပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သောင်းအထက်သွင်းထားသော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးထောင်အထိ တန်ဖိုးရှိသော မော်တော်ယာဉ် များတင် သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်္ဘောသားများကိုမူ အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သောင်းမှ ငါးသောင်း အထိ၊ ဘဏ်သွင်းထားသူများကို ကန်ဒေါ်လာငါးထောင်မှ တစ်သောင်းငါးထောင် အထိ တန်ဖိုးရှိသော မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းအောင်ကျော်က ရှင်းပြသည်။
လုပ်သားများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ တင်သွင်းလာမည့် အဆိုပါကားများ ဈေးကွက်အတွင်း ဝင်ရောက်လာပါက ပြည်တွင်း ကားဈေးကွက်တွင် ဈေးသုံးမျိုးဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမြင့်ကားသစ်များ ဝယ်ရောင်းဈေး၊ ဂျပန်မှ သွင်းလာသော အသုံးပြုပြီးယာဉ်များ ဝယ်ရောင်းဈေးတန်းနှင့် ပြည်တွင်း၌အသုံးပြုနေသော ယာဉ်များဈေးတန်း ဟူ၍ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကားများ အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်လာပါက ကားဈေးများ ထပ်မံကျဆင်းပြီး အရောင်းအဝယ်နည်းနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းကားဈေးကွက်တွင် အားမျှခြေကားဈေးနှုန်းတစ်ရပ် လာမည့် နှစ်ဆန်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကြောင်း ကားဝယ်ရောင်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက သုံးသပ်ကြသည်။
ဒေါ်လာငါးသောင်း တန်ဖိုးရှိယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့်ရသောလုပ်ငန်းရှင်အများစုမှာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ဈေးမြောက်နေသော Mark X ကားများ တင်သွင်းလာဖွယ်ရှိရာ Mark X အပါအဝင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ထိပ်တန်းရောက်နေသော ဇိမ်ခံကားဈေးများ အနည်းဆုံး ထက်ဝက်ကျော်ခန့် ပြုတ်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း ကားဝယ်ရောင်း ကြီးများက သုံးသပ်ကြသည် ။
နိုဝင်ဘာလ ၁၇ရက်နေ့အထိ ရရှိသောသတင်းများအရ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ၁၇ဝဝ ခန့် တင်သွင်းခွင့် ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ထဲမှ ၈၉ဝ ကို ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုရန် စာရင်းတင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းတို့ထဲမှ အချို့မှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည် ။
Posted by M-netizen at 2:10 PM0comments
Labels: ပြည်တွင်းသတင်း, သတင်းဖတ်စာ, မောင်းသတင်း
မြန်မာ ဘောလုံးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Association Statement)
Posted by သူကြီး at 9:13 PM0comments
Labels: အားကစား, ကြေညာချက်
မြန်မာအသင်း (ကိုရီးယား) ဘော်လုံး ဦးဆောင် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ၊ ကော်မတီမသိဘဲ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် ကလပ်အသင်းများ သတိထား
ဘူချောန်းမြို့ ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်
လွန်ခဲ့သော နိုဝင်္ဘာ ၁၃ ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့ မြန်မာအသင်း(ကိုရီးယား) တွင်ကျင်းပသော အစည်းအဝေးက ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းရှိ မြန်မာဘောလုံး ကလပ် ၁၃ သင်းမှဦးစီး ဦးဆောင် တစ်ဦးကျစီ ပါဝင် သော မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လုံးအသင်း (ဘော်လုံး) ကော်မတီ ကို ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြောင်း နှင့် ၄င်းကော်မတီတွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည် -
- (၁) ကိုနေသူလှိုင် (ဂေါ်ဂျယ်ဘော်လုံးအသင်း)
- (၂) ကိုစိုးလင်းစိုး (ဒေဂူးဘော်လုံးအသင်း)
- (၃) ကိုဥာဏ်ထွန်း (ရက္ခပူရဘော်လုံးအသင်း)
- (၄) ကိုဝန့်လျန်းမုန်(ခ)ကိုဝီလျံ (ချင်းလူငယ်ဘော်လုံးအသင်း)
- (၅) ကိုကျော်ဝေ (ချောင်းဦးဘော်လုံးအသင်း)
- (၆) ကိုဝင်းနိုင် (အင်ချွန်း စောဂူ ဘော်လုံးအသင်း)
- (၇) ကိုကျော်မိုးမြင့်(ခ)ကိုကျော်လေး (အင်ချွန်းယူနိုက်တက်)
- (၈) ကိုကျော်မိုး (အန်စန်းဘော်လုံးအသင်း)
- (၉) ကိုဖိုးရဲ (မိုးကြိုးဘော်လုံးအသင်း)
- (၁၀) ကိုဝင်းအောင်ကျော်(ခ)ဗိုလ်ဝင်း (ဧရာဝတီဘော်လုံးအသင်း)
- (၁၁) ကိုအောင်ကျော်လင်း (ဂရောင်းဆန် ဒေဂူးဘော်လုံးအသင်း)
- (၁၂) ကိုသားငယ် (ဂွမ်ဂျုးဘော်လုံးအသင်း)
- (၁၃) ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်း (ခ) ကိုဖြိုး (အောင်ဆန်းဘော်လုံးအသင်း)
ထို့ပြင် အဆိုပါ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လုံးအသင်းကြီး ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လှုပ်ရှား လည်ပတ် နိုင်စေရေးအတွက် ဦးဆောင်ကော်မတီ ကိုလည်း အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ် (၇)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည် -
- (၁) ကိုဝင်းအောင်ကျော်(ခ)ဗိုလ်ဝင်း (မြန်မာအသင်းအားကစားရေးရာမှူး)
- (၂) ကိုကျော်ဇောအေး(ခ)ကိုကျားကြီး (အန်စန်း)
- (၃) ကိုကျော်မိုးမြင့်(ခ)ကိုကျော်လေး (အင်ချွန်းယူနိုက်တက်)
- (၄) ကိုဖိုးရဲ (မိုးကြိုး)
- (၅) ကိုပိုင်(ဧရာဝတီ)
- (၆) ဘဏ္ဍာရေးမှူး - ကိုဝန့်လျန်းမုန်(ခ)ကိုဝီလျံ (ချင်း)
- (၇) ပြန်ကြားရေးမှူး- ကိုဝင်းလှိုင် (အောင်ဆန်း)
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာဘော်လုံးသမားများ စုစည်းနိုင်ရေး နှင့် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် အောင်နိုင်မှုရရှိစေရေးအတွက် ၊ နိုင်ငံတကာဘော်လုံးပြိုင်ပွဲများတွင်ယခုဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လုံးအသင်း အနေဖြင့်သာ မြန်မာကိုယ်စားပြုအသင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၊ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လုံးအသင်းအတွက် လက်ရွေးစင်အားကစားသမားများကို မူ ကလပ်အသင်းအသီးသီးမှ အနည်းဆုံး(၂)ဦး ကျစီရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကလပ်အသင်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာဘော်လုံးပြိုင်ပွဲများသို့ ပါဝင်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်းခံရပါက ကလပ်အသင်းတာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လုံးအသင်းထံ မပျက်မကွက် အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဖိတ်ကြားခံ ကလပ်အသင်းများအနေဖြင့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လုံးအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများအား အကြောင်းမကြားဘဲ နိုင်ငံတကာ ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲများသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါက မြန်မာအသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ပင် ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှစတင်ပြီး မြန်မာအသင်းမှ ဦးစီးပြီးဘော်လုံးပြိုင်ပွဲကို အကြိုဖွင့်ပွဲအဖြစ် (၅)လပိုင်းတွင်တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပြီး၊ (၁၀)လပိုင်းတွင် တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ မရှင်းမလင်းသည်များရှိပါက ကော်မတီဝင်များဖြစ်စေ မြန်မာအသင်းဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ရင် (၀၁၁-၉၃၈၆-၇၁၅၃)ထံဖြစ်စေ မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည် ။
Posted by M-netizen at 1:48 AM0comments
Labels: အားကစား, အားကစား အစီအစဉ်, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ကြေညာချက်, မောင်းသတင်း
ရေးသားသူ — မဇ္ဈိမယာနအဖွဲ့
ဘူဆန်မြို့ ကိုရီးယား-မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုရိပ်သာ ပြည်တော်ဦးဆရာတော်အား အမှူးထား၍ ဘူဆန်မြို့နှင့် ဂင်မဲမြို့ရှိ ရွှေညီအစ်ကိုများမှ အလှူတော်မင်္ဂလာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန်။ ။ နံနက် (၁၁) နာရီမှ နေ့လယ် (၃) နာရီ အထိ
နေရာ။ ။ ဂင်မဲမြို့ မဇ္ဈိမယာနရုံးခန်း၊ ရွှေအလင်းတန်းစာကြည့်တိုက်
Posted by သူကြီး at 9:04 PM0comments
ဖရိမ်နံပါတ် W ပါ 99 မော်ဒယ်လ်အထက်ကားများ ထုတ်ယူခွင့်မပြု
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်္ဘာ ၉ ။
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပထမအသုတ် ရောက်ရှိလာသော မော်တော်ယာဉ်များအနက် Chassis Code (ဖရိမ်နံပါတ်) တွင် W ပါရှိလျှင် Wagon ဟု သတ်မှတ်ပြီး 1999 မော်ဒယ်လ်အထက်ကျော်လွန်ပါက ထုတ်ယူခွင့်မပေးဘဲ ခေတ္တတားမြစ်စာရင်းသွင်းကာ ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း ဆိပ်ကမ်းသို့ ယာဉ်သွား ရောက်ထုတ်ယူသူများထံမှ ယနေ့ စုံစမ်းသိရှိရသည် ။
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် Mark II နှင့် အခြား Saloon/Van များကို 2002 Model အထိ တင်သွင်းခွင့်ပြု ထုတ်ယူလျက်ရှိရာတွင် Van အုပ်စုဝင် Corolla Wagon, Callina Wagon နှင့် အခြား Van အုပ်စုဝင် ကားငယ်များ ဖြစ်သော်လည်း Chassis Code တွင် W ပါရှိပါက Wagon ဟုသတ်မှတ်ပြီး 1999 မော်ဒယ်လ်ကျော်လွန်ပါက ကားထုတ်ခွင့်မရဘဲ အကောက်ခွန်ရုံးတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိကြောင်း ကားသွားရောက် ထုတ်ယူခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
'' Mark II ကားတွေကို 2002 အထိ ခွင့်ပြုပြီး Van အုပ်စုဝင်ယာဉ်ငယ်တွေကို 2002 အထိ ခွင့်မပြုတာ နားမလည်နိုင်ဘူး'' ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
ယခင် စီးပွားရေးဦးပိုင်နှင့် အခြားသွင်းကုန်ပါမစ်များတွင် Van အုပ်စု အဖြစ် Toyota Wish, Toyota Caldina Van, Toyota Probox Van, Toyota Corolla Van, Toyota Mark II Van အများအပြား ထုတ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်က တင်သွင်းထားသောကားများမှာ Van ဖြင့် သွင်းကုန်ပါမစ် ခွင့်ပြုထားကာ ဖရိမ်နံပါတ်မှာ W အုပ်စုဝင် Grade မြင့်ကားများဖြစ်ပြီး Wagon ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ၍ ယခု ပါရမီ Taxi ယာဉ်အဖြစ် ပြေးဆွဲနေကြောင်း ကားတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
''W ဖရိမ်နံပါတ် ပါပေမယ့် က.ည.န ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မှာ Van အုပ်စု အနေနဲ့ပဲ မှတ်တမ်းထုတ်ပေးနေတာ''ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ဂျပန်နိုင်ငံက နှိပ်ထားသည့် ဖရိမ်နံပါတ်ကိုသာ အတည်ယူကြောင်း၊ ခိုင်မာတိကျသော အထောက်အထားအတိုင်း ဆောင်ရွက်နေပြီး အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ကိုက်ညီလျှင် ကားထုတ်ပေးနေကာ မကိုက်ညီလျှင် ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည့်အတိုင်း ကားသိမ်းယူမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ခေတ္တတားမြစ်ခြင်းများ ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက ပြောကြား သည် ။
- The Voice Weekly (7/48)
Posted by M-netizen at 6:44 AM0comments
Labels: မျှဝေခြင်း, ပြည်တွင်းသတင်း, သတင်းဖတ်စာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, မောင်းသတင်း
ကိုရီးယား အီးပီ အလုပ် လျှောက်လွာ ဘယ်လိုရေးမလဲ
တတိယအကြိမ် eps - topik exam အောင်ထားပါတယ်အစ်ကို..
အခု လ 19 ရက်နေ.မှာအလုပ်လျှောင်လွှာခေါ်ယူပါမယ်။
ကျန်တော်သိချင်တာက အခု တောင်ကိုရီးယားမှာ ဘယ်လို အလုပ်အကိုင် မျိုး ခေါ်ယူမှု များပါသလဲ။
အလုပ်လျှောက်လွှာမှာ ဘယ်လိုမျ။ိုး ဖြည်. ရ မလဲဆို တာ ကို အသေးစိတ် ပြောပြပေးပါလား။
တစိတ်လောက် ကုညီပေးစေချင် ပါတယ် ။
ကိုရီးယား အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံရှိပါတယ် ။ အဲသည်ပုံစံအတိုင်း အသုံပြုလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ အမှန်တော့ အလုပ်လျှောက်လွှာဟုဆိုရသော်လည်း ၊ အလုပ်လျှောက်လွှာမဟုတ်ပါ ။ အလုပ်အကိုင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် လျှောက်လွှာ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ် ။ သို့ရာတွင် ခေါ်ဆိုရ လွယ်ကူစေရန် “အလုပ်လျှောက်လွှာ” ဟုသာ သုံးနှုန်းလိုက်ပါတယ် ။
ကိုရက်ပ်စ်လုပ်သားများ ၊ အလုပ်နေရာပြောင်းလိုခြင်း သို့မဟုတ် ၊ အလုပ်ရုံအဟောင်းက ဆက်မခန့်တော့ခြင်း ၊ ဒေ၀ါလီခံခြင်း စသည်ဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၊ အလုပ်မရှိတော့ဘူးဆိုလျင် ၊ ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများက နိုဒုံဘု(노동부) ဟုသိကြသော အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ၊ ဂျိဝေါန်စင်ထော်(지원센터) ခေါ် အလုပ်အကိုင် ထောက်ပံ့ရေးဌာန(Employment Support Center: ESC)တွင် ၊ ဖော်ပြပါ လျှောက်လွှာကို ဖြည့်စွက်၍ အလုပ်ရှာသူအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရပါတယ် ။
ထိုသို့ မှတ်ပုံတင်ကြရာမှာ ၊ လျှောက်လွှာပါအချက်အလက်များကို သေသေခြာခြာ ဂဃနဏ မသိသဖြင့် ၊ သူတစ်ပါးကို ဖြည့်ခိုင်းရာမှ ၊ မလိုအပ်သော အခက်အခဲ ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီး ၊ မဂိန်ချင်ဘဲနှင့် ဂိန်လိုက်ရ ၊ မအိုချင်ဘဲနှင့် အိုလိုက်ရသော မြန်မာမိတ်ဆွေများ အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ကျနော်တို့ ကိုရီးယားရောက် ကိုကိုရွှေမြန်မာများ နှင့် ၊ နောင်လာလတံ့သော ညီတော်မောင် ကိုရက်ပ်စ်လုပ်သားလောင်းများ ထိုထိုသော ပြဿနာမျိုး ထပ်မံ ခံစားရခြင်း ၊ ကြုံတွေ့ရခြင်းများ မရှိကြရလေအောင် ၊ ထိုလျှောက်လွှာပါ အချက်အလက်များကို လေ့လာမှတ်သား သိရှိထားနိုင်ကြစေရန်အလို့ငှာ ၊ (ထပ်မံ) တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။
လျှောက်လွှာပုံစံမှာ (Click Here)-
알선 ညှိနှိုင်းခြင်း ၊ စီစဉ်ခြင်း ၊ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
국적 နိုင်ငံသား (မည်သည့်နိုင်ငံသား)
구직등록번호 အလုပ်ရှာသူများ မှတ်ပုံတင်အမှတ်
성별 လိင်(ကျား ၊ မ)
생년월일 မွေးသက္ကရာဇ်( နှစ် ၊ လ ၊ ရက်)
송출기관 ပို့လွတ်သည့်အဖွဲ့အစည်း(ရွှေအင်းဝ စသည်ဖြင့်)
연락처 ဆက်သွယ်ရန်(လိပ်စာ စသည်)
희망업종 မျှော်မှန်းလုပ်ငန်း အမျိုးအစား
희망근무지역 မျှော်မှန်းအလုပ်ဒေသ (အလုပ်လုပ်လိုသော နေရာ)
시.도 မြို့ ၊ ပြည်နယ်
군.구 မြို့နယ်စု ၊ မြို့နယ်(မြို့ပြ)
무관 မည်သည့် ဒေသမဆို ။ (မူလ အဓိပ္ပါယ်မှာ “ပတ်သက်ခြင်းမရှိ” ဖြစ်သည် ။
နေရာ ၊ ဒေသ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိ ဟုဆိုသဖြင့် ၊ မည်သည့်ဒေသမဆို
လုပ်ပါမည်ဟု ဘာသာပြန်သည် ။)
희망임금형태.금액 မျှော်မှန်းလစာအခြေအနေ ၊ အရေအတွက်
주급 လုပ်အားခ (ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျင်)
일급 လုပ်အားခ (တစ်ရက်လျင်) ( ရက်ကြေး)
시급 လုပ်အားခ (တစ်နာရီလျင်) ( နာရီကြေး)
--만원이상 ၀မ် ------- သောင်း အထက် ။
기타 희망사항 အခြားမျှော်မှန်းထားချက်များ
근무가능기간 및 시간등အလုပ်လုပ်နိုင်မည့်ကာလနှင့် အချိန် စသည်များ
이력 및 경력사항 ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် နှင့် အတွေ့အကြုံ
수료 လက်မှတ်ရ (ဒီပလိုမာ စသည်။)
중퇴 ကျောင်းထွက် (တစ်ဝက်တပျက်ကျောင်းထွက်သူများ)
자격면허 လိုင်စင်၊ ကျွမ်းကျင်လက်မှတ်
상.중.하 အထက် ၊ အလယ် ၊ အောက်
직무내용 အလုပ်အကိုင် အကြောင်းအရာ
직책 (အလုပ်) တာဝန်
취업알선 신청사유 အလုပ်အကိုင် လျှောက်ထားရသည့်အကြောင်းရင်း
자기소개 (မိမိကိုယ်တိုင်ရေး) မိတ်ဆက်စကား(အပိုစာရွက်ဖြင့် ပူးတွဲ တင်ပြနိုင်ပါသည်။)
업무능력 및 희망 업무등အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်ပုံနှင့် မျှော်မှန်းထားသောအလုပ်စသည်များ
특기사항 အထူးပြု ဖော်ပြလိုသည့်အချက်
기타 အခြား (ဖော်ပြလိုချက်များ)
상기 기재한 အသေးစိတ်ရေးသား တင်ပြထားသော
틀림 없음을 အမှားအယွင်းမရှိကြောင်းကို
확인합니다 အတည်ပြုအပ်ပါသည် ။
신청인 လျှောက်ထားသူ (အမည်ကိုရေးရန်။)
서명 또는 인 လက်မှတ် သို့မဟုတ် တံဆိပ်တုံး
수수료 ၀န်ဆောင်ခ (အကျိုးဆောင်ခ)
구비 서류 (အတူ) တင်ပြသည့် စာရွက်စာတမ်း
외국인 등록증 နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြား
အခုဖော်ပြမယ့် အချက်အလက်တွေ အရေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ် ။
- မျှော်မှန်းလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း (Manufacturing) လို့ပဲ ရေးစေချင်ပါတယ် ။ (အခုလက်ရှိမှာ မြန်မာတွေကို စိုက်ပျိုးရေး ငါးဖမ်းစသည်များမခေါ်တော့ဘဲ ၊ သည် တစ်မျိုးပဲခေါ်မယ်လို့သိထားပါတယ် ။)
- မျှော်မှန်းအလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား ။ သံရည်ကြို ၊ ပလပ်စတစ်အင်ဂျက်ရှင် ၊ ပရိဘောဂ စသည်ဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ လုပ်ချင်ရာ အလုပ်အမျိုးအစားကို ရေးရပါလိမ့်မယ် ။
- မျှော်မှန်းအလုပ်တာဝန်အကြောင်းအရာ ။ အထွေထွေလုပ်သား (General Worker) လို့ပဲ ရေးရပါလိမ့်မယ် ။
- မျှော်မှန်းအလုပ်ဒေသ (အလုပ်လုပ်လိုသော နေရာ) ၊ ပြည်နယ် (Province) ၉ ပြည်နယ် နှင့် မြို့တော်ကြီး (Metropolita City) ၇ ခုရှိရာမှာ မိမိလုပ်လိုတဲ့ ဒေသအမည်ကို ရေးရပါလိမ့်မယ် ။ ဒေသနေရာတွေ အကြမ်းဖျင်းသိချင်ရင်တော့ (Click Here)
- မည်သည့် ဒေသမဆို ဆိုရင်တော့ အလုပ်မြန်မမြန်မရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ သို့သော် ကိုရီးယားရောက်ပြီး မကြာခင် ပြောင်းချင်လို့ ဆိုတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ရောက်ရောက်ချင်း ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့ကိစ္စဟာ တော်တော်လေးခက်ပါတယ် ။ အဆင်ပြေပြေ ပြောင်းနိုင်တဲ့သူဆိုလို့ တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်လို့ ပြောရလောက်အောင်ကို အခက်အခဲရှိတာ တွေ့ရပေါင်းများနေလို့ပါ ။
မှတ်ချက် ။ ယခင်တင်ပြခဲ့ပြီး ပို့စ်ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီး ထပ်မံတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 11:58 PM0comments
Labels: ဗဟုသုတ, အလုပ်ခွင်ရေးရာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ဆောင်းပါး, မောင်းသတင်း
အားကစားရေးရာဌာန အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း
မြန်မာအသင်း(ကိုရီးယား)၏ အားကစားရေးရာဌာနအား တိုးချဲ့မှုနှင့် ပါတ်သက်၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဘောလုံးအသင်း အသီးသီးမှ ညီအစ်ကိုများ ၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့) မွန်းလွဲ ၄ နာရီအချိန်တွင် ဘူချွန်းမြို့ မြန်မာအသင်း(ကိုရီးယား)ရုံးခန်းသို့ လာရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Posted by မောင်ကောက်ရိုး at 4:53 PM0comments
Labels: ဖိတ်စာ, အားကစား
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 12:34 AM0comments
Labels: ကဗျာ, ကဗျာ ၊လင်္ကာ
ကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားများ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကားစီးရေ နှစ်သောင်းခန့် သွင်းခွင့်ရမည်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်္ဘာ ၉
အစိုးရ၏ကားသွင်းခွင့်မူဝါဒသစ်အရ ယာဉ်ဟောင်းအစားထိုးယာဉ်သစ် တင်သွင်းခွင့်အပြင် ကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာလုပ်သားများကို ဝန်ကြီးဌာန ငါးခုမုမှ တစ်ဆင့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ကားစီးရေ နှစ်သောင်းခန့် သွင်းခွင့်ပေးရန် စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း စီးပွါးရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးနှင့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမည့် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတို့ The Voice Weekly ၏ဆက်သွယ် မေးမြန်းမှုကို အတည်ပြုပြောကြားသည်။
''ဝန်ကြီးဌာန ငါးခုကနေ တစ်ဆင့်ကားသွင်းမယ့် ကုမ္ပဏီတွေ၊ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မြန်မာလုပ်သားတွေ လျာထားချက် တောင်းထားပါတယ်။ လာမယ့်တစ်ပတ်မှာ လျာထား ချက်တွေရမယ် ။ လျာထားချက်ရတာနဲ့ ကားသွင်းခွင့်တွေ စပေးမှာပါ'' ဟုအဆိုပါအကြီးတန်းအရာရှိက ရှင်းပြသည်။
ကားတင်သွင်းခွင့်အတွက်ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနက ကားသွင်းမည့် ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်များ လျာထားချက်စာရင်း ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ကားသွင်းမည့် ပြည်ပရောက် မြန်မာလုပ်သားများ လျာထားချက်စာရင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကားသွင်းမည့်သင်္ဘောသားများ လျာထားချက်စာရင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကားသွင်းမည့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ လျာထားချက်စာရင်းနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကားသွင်းမည့် ပြည်ပမြန်မာသံရုံးများမှ ကားသွင်းမည့် သံရုံးဝန်ထမ်းများစာရင်းတို့ကို မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီထံသို့ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကော်မတီက ပေးပို့လာသော လျာထားချက်စာရင်းပေါ်မူတည်၍ ကားသွင်းခွင့် အမြန်ဆုံးပြန်ချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအစီအစဉ်အရ ဘဏ်၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်း သွင်းထားသော လုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ်တွင် ဒေါ်လာသုံးသောင်း သွင်းထားသော လုပ်သားများသာ အကျုံးဝင်ကြောင်း ၄င်းကဆိုသည် ။
''အခု ကျွန်တော်တို့သိထားတာ အစီးရေ နှစ်သောင်းကျော်လောက် ခွင့်ပြုပေးဖို့ရှိတယ်။ ၂ဝဝ၇ ကနေ ၂ဝ၁၁ မော်ဒယ်လ်အထိ သွင်းခွင့်ပေးမှာ။
ဒီတော့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားငွေ ပေါက်ဈေး တစ်ဒေါ်လာကျပ် ၉ဝဝ နီးပါး ပြန်ရောက်နိုင်တယ် ။ နောက် အခု ဂျပန်ဈေးကွက်မှာ ၂ဝဝ၂ မော်ဒယ်လ်အောက်တွေ ဈေးမြောက်နေတဲ့ပြဿနာရှင်းသွားမယ်။ ဂျပန်ဈေးကွက်မှာ ဈေးပြန်ငြိမ်သွားမယ်ပေါ့ ။ ပြည်တွင်းကားဈေးတော့ ပြုတ်ကျသွားမယ်လို့မှန်းတယ်'' ဟု ကားအရောင်းစင်တာ ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်နေသူ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည် ။
အစိုးရ၏ ယင်းထပ်တိုးမှုဝါဒသစ်အရ တင်သွင်းလာမည့်ယာဉ်များမှာ ကားဟောင်းအပ်ရန် မလိုသဖြင့် စလစ်ပေါက်ဈေးမရှိတော့ခြင်း၊ မော်ဒယ်လ်အမြင့်သွင်းခွင့်ရခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းကားဈေးကွက်တွင် ကား ဈေးနှုန်းများထပ်မံကျဆင်းနိုင်ကြောင်း၊ Mark II (ရွှေငါး)ကို ဂျပန် ဈေးကွက်တွင် အလုအယက်ဖြင့် ဈေးမြင့်ပေး ဝယ်ထားသူများ ရွှေငါးဈေးပြုတ်ကျသွားနိုင်သဖြင့် ထင်ထားသလောက် အကျိုးအမြတ်မရှိနိုင်တော့ ကြောင်း လုပ်သက်နှစ် ၂ဝ ခန့်ရှိ ဝါရင့်ကားဝယ်ရောင်းတစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။
အဆိုပါစနစ်ဖြင့် ကားသွင်းခွင့်ပေးရန်အတွက် ဘဏ်စာအုပ်တွင်ဒေါ်လာတစ်သိန်းပြနိုင်သော ကုမ္ပဏီအရေအတွက် နိုဝင်ဘာလ ၉ရက်နေ့အထိ တစ်ထောင်ကျော်ခန့်ရှိပြီး လတ်တလော ဒေါ်လာ တစ်သိန်းကျော် မပြနိုင်သေးသော်လည်း ရက်ပိုင်းအတွင်းပို့ကုန်များ တင်ပို့ပြီးပါက ဒေါ်လာတစ်သိန်း ပြည့်သွားမည့်သူများလည်းရှိရာ ၄င်းတို့ကိုပါ ထပ်ပေးမည်ဟု ယူဆရကြောင်း ၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာလုပ်သားများနှင့် သင်္ဘောသားများ ၊ သံရုံးဝန်ထမ်းများမှာလည်း လတ်တလော ဘဏ်စာရင်းတွင် ဒေါ်လာသုံးသောင်း မပြနိုင်သော်လည်း ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည့် ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝ အခွန်ဆောင်ထားပြီးပါက သတ်မှတ်ဒေါ်လာ ဘဏ်စာရင်း သွင်းပြီးချိန်တွင် ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာလုပ်သားများက ပြောဆိုသည် ။
- The Voive Weekly(7/48)
Posted by M-netizen at 10:07 PM 1 comments
Labels: ပြည်တွင်းသတင်း, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ကြော်ငြာ, မောင်းသတင်း
3rd EPS-TOPIK in Myanmar အောင်စာရင်းထွက်ပါပြီ
မြန်မာကိုရီးယားအီးပီလုပ်သားလောင်းများ တတိယအကြိမ်ကိုရီးယားအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (3rd EPS-TOPIK) အောင်စာရင်း (ဟောဒီမှာ) ရယူနိုင်ပါပြီ ။
အထက်ကဟာကတော့ EXL ဖိုင်ပါ ။ (ဟောဒီမှာ) တော့ PDF စာမျက်နှာအဖြစ် ရိုးရိုးလေးကြည့်လို့ရပါတယ် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 1:05 PM4comments
Labels: အလုပ်သမား အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်, ကြေညာချက်, ကြော်ငြာ, မောင်းသတင်း
အမည်= MIN MIN HAN
မွေးနေ့= 24 November 1977
အထက်ပါ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပိုင်ရှင်အား ရှာဖွေလျှက်ရှိပါသည်။
ထို နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ ကိုမင်းမင်းဟန်သည် အလုပ်ရုံတခုမှ ရရှိရမည့် လုပ်သက်ခံစားခွင့်ငွေအား တိုင်တန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို လုပ်သက်ခံစားခွင့်ငွေကို ကိုမင်းမင်းဟန်အား သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံမှ လုပ်သက်ခံစားခွင့်ငွေ ပေးဆောင်ရန် ကိုရီးယား အလုပ်သမားဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကိုမင်းမင်းဟန်နှင့် ဆက်သွယ်မှု လုံးဝ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါသည်။ ကိုမင်းမင်းဟန်၏ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ ခံစားနိုင်ရန်အတွက် ကာယကံရှင် ကိုမင်းမင်းဟန်၊ ကိုမင်းမင်းဟန်ဖြင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူ အပေါင်းအသင်းများ အနေဖြင့် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ကြပါရန် အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ကိုကျော်မိုးလွင်(တို့ပိုင်တဲ့မြေ စားသောက်ဆိုင်) = ဝ၁ဝ-၈၇၁၄-၇ဝ၁၉
ကိုမင်းမင်းဟန်အနေဖြင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြင်ပ ရောက်ရှိနေလျှင် koluchit@gmail.com မှတဆင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Posted by ကိုလူချစ်(ကိုရီးယား) at 1:04 AM0comments
ကလေး(၃)ဦး မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ယောက်ျား
“ယောကျာ်း ဖောင်စီး မိန်းမ မီးနေ” ဆိုတဲ့ စကားက မှန်တော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့် အပြည့်အဝ မမှန်တော့ ဘူး လို့ ဆိုရမှာပါ။ မိန်းမတစ်ဦး အရွယ် ရောက်ပြီး အိမ်ထောင်ကျရင် သားဖွားခြင်း အလုပ်ကို အသက်နဲ့ ရင်းပြီး လုပ်ဆောင် ကြရတာ မဟုတ်ပါလား။ အခုတော့ အဲဒီသားဖွားခြင်းအလုပ်ကို ယောကျာ်းတွေ လည်းလုပ်နေကြပါပြီ။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်းပါပဲ သောမတ်စ်ဘီတီ (Thomas Beatie,) ဟာ ယောကျာ်းတစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကလေးမွေးဖွား ခဲ့ရာ မှာ တစ်ကြိမ်မကတော့ပါဘူး။
ကလေး (၃)ဦးတောင်မွေးဖွားခဲ့တာကြောင့် နောက်ထပ် ကလေးမမွေးတော့ဘူးလို့ ဖွင့်ဟပြောဆိုလိုက် ပါပြီ။ သောမတ်စ်ဟာ အသက်(၂၀)အရွယ်မှာ testosterone ဟိုမုန်းတွေ စတင်ထိုးခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ အသံဟာလည်း မိန်းမအသံပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ သူဟာ မိန်းမမျိုးပွားအင်္ဂါတွေရှိနေတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးသမီးလေးဆူဆန်ကို ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့တာ ကြောင့် သူနဲ့ဇနီးနန်စီတို့ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
နန်စီဟာ ငယ်စဉ် ကတည်းက သားအိမ် ခွဲထုတ်ခဲ့တာကြောင့် ဆူဆန်ကိုမမွေးခင်ရက်အနည်းငယ်အလိုမှာ ဖြစ် ပေါ်ခဲ့တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သောမတ်စ်က “ကျွန်တော်ဖော်မပြနိုင်လောက်အောင် ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။ ဆူဆန် လေး ကျွန်တော့် ဗိုက်ထဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် မယုံခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာမိသားစုဘဝ တည် ဆောက်ဖို့ ကျွန်တော်နဲ့နန်စီတို့ နှစ်ရှည်လများ မျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အရီဇိုးနား ပြည်နယ်မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင် နေတဲ့ သောမတ်စ်ဟာ ကလေးထပ်မယူဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့် သားအိမ်ကို ခွဲစိတ် ဖယ်ရှားပစ်တောာ့မယ်လို့ သိရပါ တယ်။
Posted by M-netizen at 12:41 AM0comments
Labels: ထူးဆန်းထွေလာ, သတင်းဖတ်စာ, မောင်းသတင်း
unplugged live ခံစားနိုင်ပါပြီ
ရေးသားသူ — တို့ပိုင်တဲ့မြေ
ချစ်ခင်ရသော ညီအကိုမောင်နှများကို သတင်းကောင်းလေး ပါးပါရစေ။
စာသင်ခန်းနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာ ဖိစီးခံရတဲ့ စိတ်တွေပြေပျောက်သွားစေဖို့ . ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အားအင်တွေကို တိုးပွားလာစေဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့သန့် ရှင်းလတ်ဆတ်သော တောစာ တောင်စာလေးတွေကို ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားပါတယ်။ အရသာထူးကဲသော အစားအစာများနဲ့အတူ ဂီတချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် unplugged live ကိုလဲ အသင့်တီးခတ် သီဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ အချစ်သီချင်းချိုချို လေးများ ဘ၀သီချင်းချိုချို လေးများကို သက်တောင့်သက်သာ တီးခတ်သီဆိုရင်း အပမ်းဖြေ စားသောက်နိုင်မဲ့ဒီအပတ် MENU ထဲမှာ ခေါင်းတရာသားချက် အမဲဥဏှောက်ကြော် ငါးဖယ်ကြော်သုတ် တို့ နဲ့ အတူ မြောင်းမြမုန့် ဟင်းခါးကို ဘူးသီးကြော် ငါးဖယ်ကြော် ပူပူ လေးများနဲ့ အတူသုံးဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။ အပတ်စဉ် MENU ပြောင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကောင်း စားလိုသူများ ကြိုတင်ဖုန်းဆက် မှာကြားနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
တို့ ပိုင်တဲ့မြေ စားသောက်ဆိုင်နှင့် မီနီစတိုး ၀၇၀ ၄၁၁၁ ၇၀၁၉
Posted by သူကြီး at 8:02 AM0comments
Labels: လူမှုရေး, ကြော်ငြာ
- ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုဖွား ရွှေမြန်မာအပေါင်းတို့...
ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီးသည် မြန်မာအလုပ်သမား အများစုနှင့် ပြည်ထောင်စုဖွား ရွှေမြန်မာများ၏ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် အားထားမှီခိုရာ ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတွင် မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းနေရာကို (ကိုယ်ပိုင်)ဝယ်ယူလှူဒါန်းပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးပေါ်ပေါက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုရီးယား အစိုးရထံမှ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် (미얀마불교전법사원)ဟူသော အမည်ဖြင့် တရားဝင်ခွင်ပြုချက် မှတ်ပုံတင်လည်း ကျပြီးဖြစ်၍ လှူဒါန်းနိုင်သော ဘဏ်အကောင့်များကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာပိုင်ကျောင်းတော်ကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးတွင် တစ်တတ်တစ်အား ပါဝင်လှူဒါန်း လိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဦးဆောင်ဆရာတော်များနှင့် နီးစပ်ရာ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်များထံ ဆက်သွယ်ကာ သင့်လျော်သည့် ဘဏ်အကောင့်များသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် (ဘူဖြောင်း)
ဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလ (ဝေါဆရာတော်) (ဖုန်း = ၀၁၀-၆၅၅၇-၀၂၂၂)
လက်ထောက် ဆရာတော် အရှင်ဥတ္တရ (ဖုန်း = ၀၁၀-၂၃၂၇-၂၄၅၇)
ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ (ဖုန်း = ၀၃၂-၅၁၁-၂၈၄၁)
၂။ ဆရာတော် အရှင်ပဏ္ဍိစ္စ (ဘူဆန်ပြည်တော်ဦးဆရာတော်) နှင့်
ဆရာတော်၏ တပည့်ကျောင်း အကျိုးတော်ဆောင်များ
(ဖုန်း = ၀၁၀-၄၀၄၅-၇၀၀၂)
၃။ ဆရာတော် အရှင်သုဝဏ္ဏ (ဆိုးလ်ဆရာတော်)
(ဖုန်း = ၀၁၀-၅၁၈၄-၃၅၇၈)
၄။ ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပ ဒါယီဆရာတော်) နှင့်
ဒယ်ဂူးစိတ္တသုခ မြန်မာကျောင်း (ဖုန်း = ၀၁၀-၃၇၈၇-၉၆၉၃)
မှတ်ချက်။ ကျောင်းတော်ကြီး ဝယ်ယူရာတွင် အားလုံးအတွက် သွားလာရေး လွယ်ကူသည့် နေရာကို ရွေးချယ်ပြီး ဝယ်ယူရန် ရည်ရွယ်ထားပါသဖြင့် တစ်နှစ်အတွင်း ကျောင်းတော်ကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ခန့်မှန်း ကိုရီးယားဝမ် သိန်းခြောက်ထောင်ခန့် စုဆောင်းရရှိရန် ရန်မှန်းထားပါ၍ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ စေတနာသဒ္ဓါ ထက်သန်စွာဖြင့် တတ်စွမ်းသမျှ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အလှူရှင်များအားလုံးကို ကမ္ဗည်းမှတ်တမ်းတင်၍ ကျောင်းတော်ကြီး၌ သမိုင်းမှတ်တိုင် ထာဝရစိုက်ထူပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း....။
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 4:39 PM2comments
Labels: ဘာသာပြန်, မြန်မာပိုင်ကျောင်းအလှူ, လူမှုရေး, ကြော်ငြာ
၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ ၅ ရက်
- ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) (CLICK HERE)
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 11:28 PM0comments
Labels: ဓမ္မဒူတအလှူ, ဘာသာရေး, သာဓုအနုမောဒနာ, ကြေညာချက်, မောင်းသတင်း
ကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားများ ယခုလဒုတိယပတ်အတွင်း ကားသွင်းခွင့်ရမည်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်္ဘာ ၃
မြန်မာအစိုးရသစ်၏ ကားသွင်းခွင့် မူဝါဒသစ်တွင်ပါဝင်သော ဘဏ်အပ်ငွေဒေါ်လာ တစ်သိန်းရှိသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ဘဏ်အပ်ငွေ ဒေါ်လာသုံးသောင်းရှိသည့် ပြည်ပရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများ ယခုလ (နိုဝင်ဘာ) ဒုတိယပတ်အတွင်း ကားသွင်းခွင့် စတင်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက The Voice Weekly သို့အတည်ပြုပြောကြားသည်။
''မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း ကြေညာချက်ထွက်မှာပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို မီဒီယာတွေကို ထုတ်ပြန်ပေးပါ့မယ်'' ဟု ၄င်းကထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
ဘဏ်ထဲတွင်ဒေါ်လာ သုံးသောင်းသွင်းထားသော ပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားများနှင့် ဘဏ်ထဲတွင်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းသွင်းထားသောကုမ္ပဏီများ ကားသွင်းခွင့်ကို ယခုလဒုတိယပတ်တွင် စတင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ကာ အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ရန်ရှိနေသည်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်နေရာ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အပြီးပြတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကရှင်းပြသည်။
ဘဏ်ထဲတွင်ဒေါ်လာ သုံးသောင်း ပြည်ပရောက် မြန်မာလုပ်သားများ နှင့် ဒေါ်လာတစ်သိန်းရှိသော ကုမ္ပဏီများ ကားသွင်းခွင့်ပြုမည့်အပြင် ၊ အခွန်ပေးဆောင်သော နိုင်ငံသားတိုင်း ကားသွင်းခွင့်ရရေး ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းက အောက်တိုဘာလ၂၆ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသောမီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြောကြားသည်။
''ပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကားသွင်းခွင့်ပေးတော့မယ်ဆိုတော့ ကားသောင်းဂဏန်းထပ် ဝင်လာနိုင်တယ်။ ဒီတော့ပြည်တွင်းကား ဈေးနိုင်ငံတကာပေါက်ဈေးနီးပါး ပြုတ်ကျသွားမယ်။ ဒါကြိုဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေမဖြစ်ဖို့ကိုလည်း စဉ်းစားပြီးကြိုတင်လုပ်ဆောင်သွားသင့်ပါပြီ''ဟု ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြသည်။
ထိုင်ဝမ်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းတို့တွင် မြန်မာကော်လံဖြူများနှင့် သင်္ဘောသား များ စုစုပေါင်း သုံးသိန်းနီးပါးရှိပြီး ၄င်း တို့၏ သုံးပုံတစ်ပုံကားသွင်းရန် စိတ်ဝင်စားပါက လူတစ်သိန်းခန့်ရှိမည်ဖြစ်ရာ ပြည်တွင်းကားဈေးကွက်တွင် ကားဈေး နှုန်းများသေချာပေါက်ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းအပြင်အဆိုပါလူတစ်သိန်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပို့ထားသောငွေများကို ဟွန်ဒီလွှဲ၍ ဒေါ်လာဝယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိဘဏ်တစ်ခုခုသို့ တရားဝင်ဒေါ်လာအဖြစ် ဒေါ်လာ သုံးသောင်းစီထည့်သွင်းလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရှိဘဏ်များတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးဘီလီယံ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည် ။
- The Voice Weekly Vo.7/ No.40
- The Voice Weekly Vo.7/ No.47
Posted by M-netizen at 11:59 PM0comments
Labels: ဗဟုသုတ, ပြည်တွင်းသတင်း, မောင်းသတင်း
ဆရာမ နုနုရည်(အင်းဝ) ဟောပြောချက်
ဆရာမ နုနုရည်(အင်းဝ)ရဲ့ ကိုရီးယား စာပေဆွေးနွေးဝိုင်း ဟောပြောချက် အသံဖိုင်ကို နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
ဆရာမ နုနုရည်(အင်းဝ) ဟောပြောချက် by koluchitkorea
Posted by ကိုလူချစ်(ကိုရီးယား) at 3:40 AM0comments
Labels: စာပေ, စာပေပွဲ
Posted by Mr TT at 7:45 AM0comments
Labels: ကိုရီးယားသတင်း, နည်းပညာ, မောင်းသတင်း
ရွက်လှအိမ် လဘက်ရည်နှင့် အသုပ်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
လေးစားအပ်ပါသော ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ရှင့် ၊
ရွက်လှအိမ် လဘက်ရည်နှင့် အသုပ်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက် အားပေးတော်မူကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ရှင့် -
နေ့ရက် ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ ၆ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် ။ နံနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီထိ
နေရာ ။ Incheon, Bupyeong-gu, Bupyeong 1(il)-dong, 341-91,
- လဘက်ရည် ၊ စမူဆာ ၊ ကော်ပြန့်ကြော် ကြာဇံဟင်းခါး တို့ဖြင့် အဝစား ။
- ဆုံဆည်းရာဆိုင်ရှေ့လမ်း ။ ယခင်ရွေအဏ္ဏဝါ ဘေးလမ်း
- ၀၁၀-၄၃၀၃-၀၃၉၉ (မလှလှဌေး)
- 010-2676-4224 (Ko Zaw Gyi)
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 4:26 AM 1 comments
Labels: ဖိတ်စာ, ကြော်ငြာ, မောင်းသတင်း